တိုင်းရင်းသား တန်းတူ အခွင့်အရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » တိုင်းရင်းသား တန်းတူ အခွင့်အရေး
တိုင်းရင်းသား တန်းတူ အခွင့်အရေး
Posted by သုရှင် on Jan 9, 2013 in Editor's Choice, Ethnic Groups, Opinion - Op-ed | 68 comments
မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မျိုးမတူကွဲပြားသော ဓလေ့ထုံးစံများ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ညှိပြီးနေထိုင်နေကြသော တိုင်းပြည်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားတို့ သည် များသောအားဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများ ၊ပြည်နယ်များ တွင် အခြေချနေထိုင်နေကြပေသည်။
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ( Discrimination ) သည် လွန်စွာမှ အကဲဆတ်သော ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အန္တရာယ် ပေါင်းစုံတို့၏ မြစ်ဖျားခံရာ ပြဿနာဖြစ်သည်ကို မူ ကမ္ဘာကလက်ခံထားပြီဖြစ်ပါသည်။ လူဖြူ-လူမည်း ပြဿနာ၊ ကျွန်-သခင် ပြဿနာ၊ အရှေ့ တိုင်းသား- အနောက်တိုင်းသား ပြဿနာ ၊ ဘာသာ အယူဝါ ဒ ကွဲပြားခြင်းပြဿနာ စသည်တို့သည် ယနေ့ထိတိုင် အောင် ပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်သေးသော ပြဿများပင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင်မူ လူသားတိုင်းတန်းတူအခွင့်အရေးရနေသည်လော မရနေသည်လော ဟူသော အမေးကို ဖြေဆိုရန်မှာ ခက်ခဲလျှက်ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တိုင်းရင်းသား များစွာတို့၏ အမြင်တွင်မူ သူတို့သည် တန်းတူအခွင့်အရေး မရ ဟုထင်ှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် မည်သူတွေက အခွင့်အရေးကို ပိုမိုရရှိနေကြလေသနည်း။
ဗမာလူမျိုး ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ တို့သည် လူအများစုဖြစ်သည့် ဗမာ များအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးလာခဲ့ကြပါသည်။ ဟိုးရှေးအစဉ် အဆက် ကတည်းက ကြမ်းတမ်းပြီး အာဏာမက်မောသည့် ဘုရင်များသည် တစ်ပြည်နှင့်တစ်ပြည် စစ်မက်ဖြစ်ပွားတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူလျှက် နိုင်သောသူက အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီး ဗိုလ်ကျ လာခဲ့ကြပါသည်။
သို့သော် ထိုမင်းများ အုပ်ချုပ်သောကြောင့် လူအများစု ဗမာတို့သည်လည်း မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှ ထူးပြီးခံစားကြရခြင်းအမှန်မရှိခဲ့ပါ။ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ကိုယ်သာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ခေတ်တွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်အတွင်း တွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သော်လည်း ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များတွင် တိုင်းရင်းသားဦးရေ အလွန်နည်းပါးခြင်းကြောင့် စစ်တပ်ကိုပင် ဗမာစစ်တပ်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်နေကြသူများလည်းရှိပါသည်။
တိုင်းရင်းသားတို့၏ အမြင်တွင် အစိုးရရုံးများအတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကိုခန့်ထားခြင်း ကိစ္စ အပါအ၀င်၊ ဘာသာရေး ကန့်သတ်မှုများ၊ တောင်ပေါ်ဒေသမျာ တွင်ဖွင့်ဖြိုးမှု နောက်ကျနေခြင်းကိစ္စ စသည်တို့ကို တန်းတူအခွင့်အရေးမရခြင်းဟူ၍ ခံယူထားကြဟန်တူပါသည်။ ၄င်းတို့၏ အနာဂတ် ကို ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ချင်ကြပါသည်။ ပြည်နယ် နှင့်လူမျိုးကောင်းစားရေးကို ဇောက်ချပြီးဆောင်ရွက်လိုကြပါသည်။
ယခုအချိန်အခါသည် နေရာတစ်ခု သို့တည်းမဟုတ် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုကွက်ကြည့်ပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်မည် ဟု ပြောဆိုနေသင့်သောအချိန်မဟုတ်ပါချေ။ မြန်မာပြည်တွင်းတွင်ရှိသော မည်သည့်လူမျိုးများကို မဆို ၊ မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို၊ မည်သည့် ဘာသာဝင်မဆို တိုးတက်ကြီးပွားအောင်ဆောင်ရွက် ကြရန်လို အပ်သောအချိန်အခါပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် တိုင်းရင်းသားတို့ ၏ အမြင် အများစု ဗမာတို့၏ လူမျိုးရေးအစွဲအမြင်များကို ပြောင်းလဲပြစ်ရန်အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ် ကို မြန်မာပြည်သူများ မုန်းတီးကြောက်ရွ့ံနေကြသည်မှာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်အပါအ၀င် မြန်မာစစ်အစိုးရ အဖွဲ့  ၏ ရည်၇ွယ်ချက် ရှိရှိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သောကြောင့် သာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ အမြင်များ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ၏ အမြင်တွင် ၄င်းတို့အပေါ်မတရားနှိပ် စက်ညင်းပန်းနေကြသည်ဟုမြင်ကြသကဲ့သို့ သားသမီးမျိုးဆက်များကိုလည်း ထိုအမြင်ကို ရိုက်သွင်းကြသည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တို့ ၏ မတရားညင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်ဆိုင်သော ကိုယ်တွေ့များရှိနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဗမာသည်လည်း တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာအများစုသည် စားကျက်ကောင်း နေရာကောင်းများဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးတစ်လျှောက်နှင့် မြေပြန့် ဒေသများတွင် အခြေချနေထိုင်လာခဲ့ရကား အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုး များထက်စာလျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စသည်တို့တွင် ပို၍ အခွင့်အလန်းများရှိရကား မြို့ ပြများ တည်ထောင်ပြီး ဖွဲ့ဖြိုးနိုင်ကြပါသည်။ ဤသည်မှာလည်း ဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာ မြို့ ကြီးပြကြီး တွင်နေထိုင်နေကြသည် မဟုတ်ပဲ။တိုင်းရင်းသားလူတန်းစားပေါင်းစုံ ကိုးကွယ်မှုဘာသာပေါင်းစုံတို့ စုပေါင်းနေထိုင်နေကြသည်ကိုမူ တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် မြင်အောင်ကြည့်သင့်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားတို့သည် တောင်ပေါ်ဒေသများတွင်ရှိသော သံယံဇာတ များ သစ်အပါအ၀င် ။ တွင်းထွက်များ။ အရင်းအမြစ်များကို မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ၄င်းတို့နှင့် ရင်းနှီးသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ထုတ်ယူရောင်းချနေသည်ကိုသာမြင်ကြပါသည်။ ထိုသို့ထုတ်ယူရောင်းချခြင်းကြောင့် ၄င်းတို့၏ နေရာ ဒေသအတွက် မည်သည့် အကျိုးကျေးဇူးမှ မရှိဟုမြင်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မြေယာများသိမ်းယူခြင်း။ သဘာဝ များပျက်စီခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းခြင်း စသည့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ကိုသာ အမွေဆက်ခံနေကြရသည်ဟု မြင်ကြပါသည်။ ထိုသို့မြင်သည့်အတိုင်းလည်းမှန်ကန်ပါသည်။သို့သော်…ဤသည်မှာ စစ်အစိုးရ လက်တွင် လုံးလုံးအုပ်ချုပ်ခံ ဘ၀အဖြစ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပြောင်းလဲလာရန်လမ်းစ ပေါ်လာပါသည်။ထိုလမ်းစ ကို တိုင်းရင်းသားများအားလုံး မိမိရရ ဆုတ်ကိုင်နိုင်ဖို့လို အပ် ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အချင်းချင်း ထာဝရ စိတ်ဝမ်းကွဲနေပါလိမ့်မည်။
တိုင်းရင်းသားများ စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းအားဖြင့် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမှ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရမလာ နိုင်ပါချေ။ စစ်စရိတ်ထောင်ခြင်း။ စစ်ပမ်းခြင်း။ နိုင်ငံတော် ၏ ဘက်ဂျက် ထိခိုက်ခြင်း။ အသက်အိုးအိမ်များပျက်စီးကြခြင်း။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံး အဝေဖန်ခံရခြင်း စသည်တို့သာ အကျိုးရလာဒ်အဖြစ်ရရှိကြပါသည်။သတင်းကြားသော ပြည်သူလူထုသည်လည်းစိတ်ဆင်းရဲ ကြရသည်။ လက်တွေ့ခံစားနေကြရသော ပြည်သူတို့အနေဖြင့် မူ ပြောစရာပင်မလိုပါချေ။
စစ်အစိုးရ မှသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖြစ် ပုံဖော်ပြောင်းလဲနေသော မြန်မာ အစိုးရ ကို ကချင်တို့က နိုင်ငံရေးစကားကို အရင်ပြောရန် ပြီးမှ အတိုက်အခိုက်ရပ်မည် ဟု ပြောဆိုကာ တင်းခံနေကြပါသည်။ ဆိုပါစို့….စစ်အစိုးရအတွက်မူ နိုင်ငံရေးအရ စကားပြောဆိုကြလျှင် သဘာဝကျပါသည်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအတွက် စစ်တပ်ချင်း နိုင်ငံရေးစကားပြောရုံနှင့် မပြီးတော့သည်ကို ကချင် စစ်တပ် သဘောပေါက်သင့်ပါသည်။ လွှတ်တော် နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ဟု သည်းသန့်ကွဲထွက်လာ သည်နှင့် အမျှ နိုင်ငံရေး စကားကို ထိုသူတို့နှင့်မပြော စစ်တပ်နှင့် သွားပြောနေ၍ မရတော့ပါချေ။ ထိုအကြောင်းကို ကေအန်ယူနှင့် အခြား ရှမ်းတောင်ပိုင်း တပ်များ နားလည်ထားဟန်ရှိသော်လည်း ကချင်တို့ ကနားလည်ကြဟန်မတူသေးပါချေ။
လိုင်ဇာ မြို့ ထဲတွင် ဗမာ မုန်းတီးရေး။ ဗမာဆန့်ကျင်ရေး ကချင်ဝါဒဖြန့် ပိုစတာကြီးများ ကပ်ရုံ။ ကချင် ပြည်သူ တို့ကို ဗမာစာ မသင်ရဟူ၍ အမိန့်ထုတ်ရုံ မျှဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နီးစပ်ပြီလော။ ကချင် ၀က်ဆိုဒ်များတွင် ဗမာ ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားရေး ဦးတည်သည့် စည်းရုံးလှုံ့ ဆော်စာများတင်ရုံဖြင့် ဤကိစ္စသည် ပြီးဆုံး ခြင်းသို့ရောက်သွားမည်ထင်ပါသလော။ မည်သို့မျှ ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ရောက်ရန်မဖြစ်နုိင်ပါသည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုမှ ကချင်စစ်တပ်သာမက ကချင် ပြည်သူလူထုကို မုန်းတီးသွားမည့်အရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ကချင်စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်နေသော စစ်တပ်ကို ထောက်ခံလာပါလိမ့်မည်။ ယခုပင်လျှင် အထင်ကရနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်ဒီ တို့သည် နှုတ်ဆိတ်လျှက်ရှိကြသည်မဟုတ်ပါလော။ တန်းတူအခွင့်အရေးကို ရလိုလျှင် တန်းတူ လွှတ်တော်ထဲတွင်လာ ထိုင်ရန်လိုအပ်နေပါကြောင်း တင်ပြပါသည်။
၀င်ရောက်လေ့လာ မှတ်သား အားပေး သွားပါတယ် သုရှင်ရေ
” ပို၍ ဆိုးသည်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုမှ ကချင်စစ်တပ်သာမက ၊
ကချင် ပြည်သူလူထုကို မုန်းတီးသွားမည့်အရေးပင်ဖြစ်ပါသည် ”
ဗမာက တိုင်းရင်းသားတွေကို မုန်းမယ့် အရေးတော့ မသိဘူး ကွယ့် ။
တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ဗမာကို မုန်းနေတာ ကြာပါပြီကောကွယ် ။
ဗမာများ ရှိတဲ့နေရာတွေမှာသာ မပြောကြပေမယ့် ၊
သူတို့ အချင်းချင်းပဲ ရှိတဲ့အခါတွေမှာ မုန်းကြောင်း တော်တော် ပြောကြပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံခြားကို ရောက်တဲ့အခါမှာပါ ။
အထူးသဖြင့် KIA ကို မုန်းတဲ့ / မထောက်ခံတဲ့ ကချင်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ ။
တိုင်းရင်းသား တွေကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးချင်စိတ်သာ တကယ် ရှိတယ်ဆိုရင် ၊
အခု KIA အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးက တောင်းနေတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စု စံနစ် ပေးလိုက်ပါ ။
တိုင်းရင်းသားတွေ သူတို့ဒေသကို သူတို့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးလိုက်ပေါ့ ။
တိုင်းရင်းသားတွေ ကလည်း နိုင်ငံ ခွဲမထွက်ပါဘူးလို့ပြောနေပြီပဲ ။
သူတို့ သယံဇာတတွေ သူတို့ပဲ သုံးစွဲကြပစေပေါ့ ။
သူတို့ စာပေကို သူတို့ဒေသမှာ ရုံးသုံးပြဋ္ဌာန်းချင်ရင် ပြဋ္ဌာန်းကြပေစေပေါ့ ။
သူတို့ က တောင်ပိုင်နတ်မင်းကြီး မွေးနေ့မှာ ရုံးပိတ်ချင်ရင် ပိတ်ပေစေပေါ့ ။
အဘ ရဲ့ စိတ်ထား ကများ သိပ်များ မွန်မြတ်နေလို့လားမသိဘူး ။
ကချင်ပြည်နယ်က ကျောက်စိမ်းတုံးတွေ ရဖို့အတွက် ၊
အစိုးရ ဗမာ စစ်သား ရော ၊ ကချင် KIA စစ်သားကော မသေစေချင်တာ အမှန်ပါ ။
ဘာ ကျောက်စိမ်းတုံး မှ မရှိ / မရ လည်း အဘ ကတော့ နေနိုင်ပါတယ် ။
သူများ ( ကချင်တွေ ) ရဲ့ ပစ္စည်း ( ကျောက်စိမ်းတုံး ) အပေါ်မှာလည်း မတော် လောဘ မရှိပါဘူး ။
ကိုယ့် အရည်အချင်း နှင့် ကိုယ် ထမင်းရှာစားနိုင်တဲ့ အတွက် ၊
အကုသိုလ် ( ကျောက်စိမ်းတုံး လုဖို့ လူသတ် ) လုပ်ပြီးမှ ထမင်းစားစရာလဲ မလိုတဲ့ အတွက် ၊
အဘ အတွက်တော့ ဘာ ကျောက်စိမ်းတုံး မှ မလိုပါဘူးကွယ် ။
အင်း ဗမာ အစိုးရ ကို ၊ ကိုယ်ချင်းတော့ စာပါတယ်လေ ၊
ဗမာ အများစု နေတဲ့ ပြည်မကြီး နေရာတွေမှာက သယံဇာတ က သိပ်မထွက်တော့လည်း ၊
( မရ မဖြစ် ကို ) လိုချင်တဲ့သူတွေတော့ ရှိမှာပေါ့လေ ။
ခက်တာက အခုခေတ်ကြီးကလည်း ၊ အရင် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ခေတ်ကြီးကလို ၊
အင်္ဂလိပ် တွေက မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက် ကျွန်ပြုခဲ့သလိုမျိုး ၊
ဗမာ တွေက ကချင် တွေကို သိမ်းပိုက် ကျွန်ပြုဖို့ကလည်း သိပ်ကြည့် မကောင်းတော့ဘူး ။
အဲဒါလေးကို ကြားကောင်းအောင် ဘယ်လို လှည့်ပြောရင် အဆင်ပြေမလဲ မသိ ။
K I A က တံတားကိုမိုင်းခွဲ ရထားသံလမ်း မိုင်းခွဲ အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကို သတ်နေတာကျတော့ ထောက်ခံကြဒယ်ပေါ့ တရားရစရာကောင်းလိုက်တာနော်
တိုင်းရင်းသားတွေကို သူတို့ဒေသ သူတို့အုပ်ချုပ် သူတို့ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးအဖြစ်နဲ့ ပြဌာန်း
အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ ဟိုး…… အရင်ကတည်းက အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားတွေက
ဘယ်သွားနေရမှာလဲ ။ သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနတွေမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဗမာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနော၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရှိတယ် ထမင်းအိုးကွဲရမှာလား…….. ??????
ခင်ဗျားရဲ့ အိုင်ဒီယာကောင်းတွေအမြဲတမ်းထွက်တဲ့ ဦးဏှောက်ကိုတော့ အရမ်းပဲ ချီးကျူးလေးဇားဘာဒယ်
အမေရိကန်တွေဟာ.. မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်ရမယ့်..အချိန်မှာ.. “USA..USA” ယူအက်စ်အေလို့.. သံပြိုင်အော်တတ်ပြီး.. သာမန်အားဖြင့်..အမေရိကန်တွေဟာ.. တိုင်းပြည်ကိုယ်စားပြုစကားဆိုရင်.. ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို.. အမေရိကားလို့ဆိုတာထက်.. ယူအက်စ်(ယူနိုက်တက်စတိတ်) ကိုသုံးကြတယ်..။
ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်..။ တိုင်းပြည်လူဥိးရေရဲ့. ၂ရာခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းစစ်နဲ့..သေကြခဲ့ဖူးတယ်..။
ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာ.. ပြည်နယ်တခုဖြစ်ပြီး.. ဘေးကကပ်ရက်.. အာရီဇိုးနား၊ နီဗားဒါး၊၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်တွေရဲ့.. ပြည်နယ်ရေးဝင်မပြော..၀င်မရှုပ်ရသလို..ဆိုင်လည်းမဆိုင်ပါဘူး..
ဟိုဖက်ပြည်နယ်.. သူ့ဖာသူ.. ပြည်တန်ဆာခွင့်ပြုဥပဒေထုတ်ထုတ်..၊ လ၀ကဥပဒေပြင်ပြင်.. ၊ရေနံတူးတူး.. ၊တာံတာဆောက်ဆောက်.. ရေကာတာဖောက်ဖောက်.. တခြားပြည်နယ်အရေး.. ကိုယ့်ပြည်နယ်သားတွေ..၀င်မစွက်ဖက်ပါဘူး..။
ကချင်အရေး..။ ရခိုင်အရေး..။ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး..ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းအရေး… ဗမာတွေ..၀င်စွက်ဖက်နေတာ.. ဗမာဟာ..သူ့ကိုယ်သူ..တိုင်းရင်းသားတမျိုးရယ်လို့မထင်ပဲ.. ဖယ်ဒရယ်သား.. တန်းမတူဘူးလို့.. (မသိစိတ်ထဲက) ထင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်..
ဧရာဝတီကိုကယ်တင်ပါဆိုပြီး.. ကချင်ပြည်နယ်ထဲက.. ရေကာတာကို..အားရပါးရ၀င်စွက်ဖက်လိုက်ကြ..။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကာပေးထားတဲ့တံတိုင်းကြီးပါဆိုပြီး. ရခိုင်တွေကို..အားပေးလိုက်ကြ..။
ဗမာတွေ.. ဖြစ်ပုံ… :buu:
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တိုင်းရင်းသား တစ်ရာကျော်ရှိတယ်ဗျ
အဲ့ဒီ တစ်ရာကျော်ကို အမေရိကန်ပုံစံမျိုး ဖယ်ဒရယ်စနစ်ပေးရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါသလားဗျာ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုတာ.. နိုင်ငံတိုင်း..လူမျိုးတိုင်း.. ခွဲရင်ခွဲသလောက်ကွဲပါတယ်..။
ကွဲအောင်ခွဲပြီးအုပ်ချုပ်ရလွယ်အောင်လုပ်တာကို.. Divide and Rule တဲ့..။
ယူအက်စ်မှာ.. တကမ္ဘာလုံးကလူမျိုးပေါင်းစုံတွေ. လာအခြေချ.. .စစ်ဒဇင်ပေး..မျိုးဆက်ပွားနေကြတာပဲ..
ခွဲလို့ကတော့.. ပြည်နယ် ၅၀၀လည်း မလောက်ပါ..။
ရှမ်းပြည်ထဲ.. လူမျိုးစုပေါင်းဆယ်ဂဏန်းရှိတာမှာ.. အင်အားအကြီးဆုံးနာမယ်.. ရှမ်း သွားယူပြီး..ရှမ်းပြည်မပေးသင့်ပါ..
ဖြစ်နိုင်ရင်.. လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့.. ပြည်နယ်ပိုင်နက်နယ်နမိတ်တွေ.. ခွဲစိတ်ချသင့်ကြောင်း..
ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဟာ.. ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်.. တွဲဖက်ရေးသာဖြစ်ပါကြောင်း….။
မြန်မာပြည်အကျယ်နဲ့.. ပြည်နယ်တိုင်း ၁၄ခုလောက်ဆို.. ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့.. အိုကေစိုပြေမယ်ထင်ပါကြောင်း…
ဒါလေးတော့ ၀င်ဖြေလိုက်မယ့် အမေရိကား တိုင်းရင်းသားက လူနီတွေကွယ့်… အဲ့လူနီတွေကကို လူဖြူတွေက မြို လိုက်တာ ကုန်ကော….. ရှင်းဒယ်နော်…. အမေရိကား မှာ လူဖြူ လူမည်း ဖြစ်တဲ့ ပြသာနာ လို့ ပဲ ရှိတယ်…. လူနီ လို့ လည်း တခါမှ မကြားရဖူး…. တနည်းအား ဖြင့် အမေရိကားဆိုတာ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ဘာမှ ကို မဆိုင်တော့တာ…. တချိန်ကြရင် ငါတို့ လည်း ဒီမှာ အဲ့ဂလို ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်…. ရှိသမျှ တိုင်းရင်းသားတွေ နာမည်ပျောက်ပီး သမ္မတကြီးက တရုတ် လွတ်တော်က တရုတ် အလုပ်သမားလူတန်းစားက ကုလား…. အော်…. ကြာတော့ မြန်မာပြည်ထောင်စုကြီးဟာလည်း အမေရိကားလို ပဲ တရုတ် ကုလား ခွဲခြား ဆက်ဆံရေး ဆိုပီး ပြသာနာတွေဖြစ် နောက်ဆုံး မူရင်း တိုင်းရင်းသားများ အမေ့ခံ ဘ၀ကိုရောက်ကော…… အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်ချင်သပဆိုရင်တော့ ဆက်သာ တိုက်ကြဟေ့….
အင်ဒီယန်းတွေကို.. Indian Tribe ဆိုပြီး.. ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေတောင်သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ဒေသ..မြေပိုင်နက်တွေပေးထားတာ.. အများးးးကြီးဗျ…
သူတို့တွေ..အလုပ်မလုပ်… ထိုင်စားလို့ရအောင်.. ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက.. ငွေအပြင်.. ကာစီနိုပါမစ်တွေချပေးရသဗျ…
. ပြည်နယ်ထဲ.. တခြားသူသမင်သတ်ခွင့် ..တကောင်ရှိရင်.. အင်ဒီယန်းက. သမင်၂ကောင်သတ်စားလို့ရသဗျ…။
အင်ဒီယန်းလည်း.. အာရှကနေ၀င်လာတဲ့.. သူတွေပါ…တဲ့..
အဆုံးတနေ့မှာ… ကမ္ဘာ့မြေကို.. ဘယ်သူမှမပိုင်… :528:
တစ်ခုရှိတာက အမေရိကထဲကများစွာကုန်သော လူမျိုးတွေရဲ့
မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လူမျိုးစုဒေသပိုင်ဆိုင်ရေး
လူမျိုးစု ဘာသာ သာသနာ စာပေ ထွန်းကားရေးတွေဟာ
အင်ဖလူးယန့်စ်လို့ခေါ်မလား သြဇာလွှမ်းမိုးရမယ် ဆိုတဲ့
ပေါ့သေးသေးလုပ်လို့ မရပါဘူး သဂျီးမင်း
အမေဒိဂန်ထဲက ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွေဟာ ပြည်နယ်ရုံးသုံးစာကို
အင်္ဂလိပ်စာကနေ လူမျိုးစု စာဖြစ်ဘို့မကြိုးစားကြပါဘူး
အခွင့်ရေးရတာနဲ့ အားလုံးကို အစကနေပြန်လုပ်ဘို့
တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ယနေ့လောက် အယူသီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူး
လူမျိုးရေးထက် အာဏာ စီးပွားရရှိရေးသမားတွေအများကြီးပါ
ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု ဆိုတဲ့လူ ပြောတာ ဒီတခါတော့ ပထမဆုံး ထောက်ခံသွားတယ်ဗျို့။ ဒီတချက်တော့ သိပ်ဟုတ်တယ်။ အမေရိကားက အမေရိကားဗျ။ မြန်မာပြည်က မြန်မာပြည် လုံးဝကို မတူဘူး။ နောက်ခံသမိုင်းချင်းလည်း မတူဘူး။ ဖြစ်တည်လာပုံချင်းလည်း မတူဘူး။ လက်ရှိလူတွေရဲ့ အခြေအနေ ပညာရေး အခြေခံတွေလည်း မတူဘူး။ အမေရိကားက စနစ်ကို မြန်မာပြည်မှာ ပုံတူကူးရင် သေချာပေါက် အောင်မြင်မယ်လို့ ပြောလို့မရတဲ့အပြင် အခန့်မသင့်ရင် ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ပိုဆိုးသွားဖို့လည်း များတယ်။
အခု တခါတလေ ဖြစ်နေတာတွေက ဗျိုင်းလို ကောင်မျိုးက နှုတ်သီးရှည်တဲ့ ခွက်နဲ့ စားလို့ရတာကို ကျီးလို နှုတ်သီးမရှည်တဲ့ ကောင်မျိုးကို အဲဒီခွက်နဲ့ ကျွေးလို့မရသလိုပဲ။ ပြောရင်လည်း စကားလုံးတွေကို နားလည်တိုင်း အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ပါနဲ့လို့ ပြောဦးမယ်။ အင်း ခွဲထွက်ရေးစကားတွေ တယ်ပြောပါလား။ ခွဲထွက်ရေးကို လှုံ့ဆော်သူတွေပါလား တံဆိပ်ကပ်မယ် အနိစ္စ။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဟာ..ခွဲထွက်မဟုတ်..တွဲဖက်ဆိုတာ.. အဘခွန်ထွန်းဦးလည်း.. ထပ်ခါပြောတယ်..။
လူတွေထဲမှာတောင်.. မြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူတွေ.. ၃သိန်းလောက်ရှိတယ်..။ ကချင်လည်းပါ..ကရင်လည်းပါ..ရခိုင်လည်းပါ..ဗမာလည်းပါရဲ့..။
ကချင်ချပ်ခ်ျမှာ ပွဲရှိရင်.. ဗမာတွေသွားအားပေးတာပေါ့..။
အဲ.. ကချင်တွေလည်း.. ဗမာဘုန်းကြီးကျောင်းပွဲလာ.. စားကြသောက်ကြပါတယ်..။
ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း.. မပေါင်း..ဘယ်သူ့သွားပေါင်းမလည်း.. နော.. :528:
ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘုရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကောင်းဆုံးကွန်မန့် ကလေးကို လေးလေးစားစား ဖတ်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဟိုတုန်းက တချို့ဆောင်းပါးတွေ အချက်အလက် မခိုင်လုံရင်လည်း ခွဲထွက်ရေး သဘောမျိုး ရေးလိုက်တာနဲ့ စတစ်ကီ ရတတ်တာကိုး။ အထင်ကို ပြောတာပါ။ ယုံချင်မှလည်း ယုံကြပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ် ဟီး ဟီး။
အယ်ဒီတာကြီး ခင်ဗျာ အယ်ဒီတာကြီး ခင်ဗျာ
ကျနော်ပြောတာ အပေါ်က “ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ် တွဲဖက်ရေး” လို့ ပြောတဲ့ ကွန်မန့်ကို မဟုတ်ပါ။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို မပြောသေးပါဘူး။ အဲဒီစနစ်ကို အသာလေး ထားပါ။ ကျနော် ပြောတာ အောက်ကကွန်မန့် ဖြစ်တဲ့ “အိမ်ထောင်စုတစုမှာ လူ ၅ ယောက်ရှိပြီး ၅ ယောက်လုံးက ရပ်ကွက်ထဲက ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် ပေးထွက်ရမှာပါပဲ။ …………….ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ အလုပ်က အဲဒီ ခွဲထွက် ၅ ယောက်စလုံး သဘောတူ နေမနေ စစ်ဖို့ပါ” လို့ရေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို ပြောတာပါ။ အဲဒီစကားကတော့ ခွဲထွက်ရေးကို အားပေးသလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။ အပေါ်က “တွဲဖက်ရေး” လို့ပြောပြီး အောက်က ခွဲထွက်ရေးကို တခါအားပေးပြန်တော့ အပေါ်က တိုက်ပုံနဲ့ ခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီး အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီစုတ်ကလေး ဝတ်လာသလို ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒါပါ ခင်ဗျ။
အမေရိကန်တောင် ကျုပ်သိသလောက် တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေ ခွဲထွက်ဖို့ လုပ်တုန်းက သမ္မတကြီး လင်ကွန်းက လက်မခံပဲ စစ်တိုက်ပြီး နှိမ်နှင်းသလားလို့။ ကွန်မန့်မှာလဲ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
“တွဲဖက်ရေးတဲ့ …..တို့များ တွဲဖက်ရေး တွဲဖက်ရေး ပြောပြီး တခါမှ တွဲဖက်ရေး မလုပ်ဖူး။ ခွဲထွက်အောင်ကို အားပေးတယ်။ ဆိုတော့ တွဲဖက်ရေးပေါ့။
မြန်မာများ ခွဲမထွက်ကြပါနဲ့ တွဲဖက်ကြစေသတည်း။”
စနစ်ကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်.. ခွဲထွက်ချင်တဲ့သူက.. ခွဲထွက်လောက်တဲ့အင်အားရှိရင်.. ခွဲထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။
ခွဲမထွက်ရဘူးလို့…ပြောခွင့်ထိန်းချုပ်ခွင့်.. ဘယ်သူ့မှာမှ.. Right မရှိပါ..။
စနစ်နဲ့.. လူ့အခွင့်အရေး ခွဲခြားနားလည်နိုင်ပါစေ…
“မြန်မာများ ခွဲမထွက်ကြပါနဲ့ တွဲဖက်ကြစေသတည်း။”
” လူသားအခွင့်အရေးပါ…။ မွေးရာပါလူသားအခွင့်အရေးပါ..။
စနစ်နဲ့.. လူ့အခွင့်အရေး ခွဲခြားနားလည်နိုင်ပါစေ… “
ဒီကွန်မန့််က အယ်ဒီတာကြီး kai တဦးတည်းကို ပြောတာပါ ခင်ဗျာ။ မဆိုင်တဲ့လူများ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော့်နာမည်ကို ခေါ်ပြီး မရှုပ်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ စနစ်နဲ့ လူအခွင့်အရေးကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအခွင့်အရေးကို ဒီမိုကရေစီဘိုးအေလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ယူအက်စ်တောင် မပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါလေး ပြောချင်တာပါ ခင်ဗျာ။ လူအခွင့်အရေး ဆိုပေမယ့် တခါတလေ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် အတိုင်းလုပ်ကြတာပါပဲ ခင်ဗျာ။ နိုင်ငံတော်တော် များများလည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ နယ်မြေများ ခွဲထွက်ခွင့်ကို အခြေခံဥပဒေမှာကို မပေးထားပါဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါ ခင်ဗျာ။
ခွဲထွက်ရေးကို အားပေးတယ် ဆိုတာ အဲဒီလို သဘောသက်ရောက်စေတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောဆိုတာပါ ခင်ဗျာ။
ဆိုလိုတာက ငြင်းချင်လို့ထက် ရှေ့စကားနဲ့ နောက်စကား ညှိပေးတာနဲ့ ကျနော်က စနစ်ကို နားမလည်လို့ အယ်ဒီတာကြီးကို ခွဲထွက်ရေးလို့ စွပ်စွဲတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စကားကိုက အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်မျိုး သက်ရောက်နေတယ်လို့ ထင်ရှားအောင် highlight လုပ်တာပါ။ စကားလုံးလေးတွေကို နားလည်သလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြတာပါ။
ထပ်ပြီး ပြောချင်တာက အယ်ဒီတာကြီးကိုပါပဲ ခင်ဗျာ။ စနစ်ဘယ်လိုပဲ ရှိရှိ လူ့အခွင့်အရေး ဘယ်လိုပဲပြောပြော အားလုံးက ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင် တမျိုး သူများအတွက်ဆိုရင် တမျိုး စဉ်းစားတတ်တယ် ဆိုတာကိုပါခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ခွဲထွက်ခွင့် မပြုတော့ အမိနိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်တာ သူများက ကိုယ့်လိုလုပ်တော့ လူ့အခွင့်အရေးကို နားမလည်သူပေါ့။
စာပေနယ်မှာလဲ ကိုယ့်လူက သူများကို ဝေဖန်ရင် လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တာ မဟုတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆွေးနွေးတာ သူများက ကိုယ့်လူကို ဝေဖန်ရင် လူ့အခွင့်အရေးကို မလိုက်နာတာပေါ့။ အဲဒါကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ် ဆိုတာပါ။ စနစ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လိုတမျိုး မလိုတမျိုး အလျှော့အတင်း မလုပ်ပဲ အားလုံး တပြေးညီ ဖြစ်စေသတည်း။
လူတစ်ယောက် က ကန်ထရိုက် တိုက် ရဲ့ မြေညီထပ် ကိုဝယ်ပြီး ငါ့ အထပ် ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ဆိုပြီး နံရံ ဖောက် မယ် ဆိုရင် … သူ့ အပေါ်ထပ် က လူတွေ ဘယ်လို တွေး မလဲ သိချင်မိသား .. ..။
ရပ်ကွက်တခုမှာ.. လမ်းထိပ်က..အိမ်က.. လမ်းကိုပိတ်ပြီးအိမ်ဆောက်လို့ရပါသလားလို့ပဲ..တွေးပါ…။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ.. ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ.. တရားရုံးချုပ်.. ဥပဒေပြုသူတွေစုထားတဲ့..လွှတ်တော်ရှိပါတယ်…။
ကချင်ပြည်နယ်က.. သူ့ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့.. ဧရာဝတီရဲ့.. အစမြစ် ..မေခ-မလိခပိတ်ဆည်ဆောက်ရင်… အောက်ပြည်အောက်ရွာကပြည်နယ်တွေက.. ဖယ်ဒရယ် မဏ္ဍိုင်၃ရပ်ကိုတိုင်နိုင်ပါတယ်..။
ကျုပ်နားလည်သလောက်.. ဧရာဝတီလိုတနိုင်ငံလုံးဖြတ်ဆင်းတဲ့မြစ်ဟာ. ဖယ်ဒရယ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်..၊
ယူအက်စ်မှာ..ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်ထဲ..ဖယ်ဒရယ်ကပိုင်တဲ့… ပန်းခြံ.. ဟိုင်းဝေးလမ်းတွေ.. သစ်တောတွေ.. မြစ်တွေ.. မြေတွေအများကြီးပါ..
ပင်လယ်ဖက်ဆိုရင်လည်း.. ကမ်းကနေ ၃မိုင်အကျော်..အင်တာနေရှင်နယ်လိုင်းအထိဖယ်ဒရယ်ပိုင်နိုင်ပါတယ်..။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကသာ ..ရခိုင်-ဗမာ၊ မွန်-ဗမာ၊ ကရင်-ဗမာ၊ ကချင်-ဗမာပြဿနာတွေရှင်းလို့ရပါကြောင်း.. :528:
Posted on February 5, 2012 by Kali
The Federal Government owns so much property it is ridiculous. Perhaps its me and my Libertarian leanings but what on earth could justify so much Federal Property (according to the US Bureau of Land Management) still being owned by the Federal Government? Nothing. Lets look at it! — 36.6% of the State of Colorado owned by the Feds. And just when you think that’s crazy.. There’s worse. The Feds own over 40% of the States; New Mexico (41.8%), Wyoming (42.3%), California (45.3%), and Arizona (48.1%). And the thought of the Federal government owning 45% of California should beashock to most.
USA ရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းရယ် ဖက်ဒရယ်ကို ရောက်ရှိလာပုံ စပြီးကျင့်သုံးစဉ်ကအကြောင်းလေးတွေ ဘယ်လိုအချက်တွေပါဝင်သလဲဆိုတာတွေကို သိချင်မိသား။ ဟိုတစ်လောက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာ/မတွေ လက်နက်နဲ့ပစ်သတ်ခံရတဲ့ကိစ္စလေးလည်း ကြားမိလိုက်တယ်။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြောင့်လဲဆိုတာလည်း သိချင်မိသား။ ပြောပြောနေကြတဲ့ ဖက်ဒရယ်လည်းဖြစ်၊ ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖခင်ကြီးလို့လည်းဆိုကြတဲ့ အဲဒီလိုနိုင်ငံမှာတောင် အဲဒီလိုတွေဖြစ်တာပဲလားလို့လည်း အံ့လည်း အံ့သြ ကြောက်လည်း ကြောက်မိသား။
ယူအက်စ်လုပ်သွားပုံလေးတွေကို.. မြန်မာအစိုးရက.. ပညာတော်သင်လွှတ်ပြီး..သင်ယူသင့်တယ်..။
သမ္မတလင်ကွန်းလက်ထက်မှာ.. ခွဲထွက်တဲ့အုပ်စု(Confederate States of America – South)နဲ့.. ဖယ်ဒရယ်(Unoin – North)နဲ့..အကြီးအကျယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲ..
ခွဲထွက်ချင်ရင်.. အုပ်စုမတောင့်ပဲ.. ထလုပ်လို့ကတော့..ဖယ်ဒရယ်က”ချ”မှာပဲ..
တလောက.. ကျောင်းသားကလေးတွေကို.. သေနတ်နဲ့ဝင်ပစ်သွားတာ.. စိတ်မမှန်သူတယောက်ပါ..။
ယူအက်စ်မှာ.. အခြေခံဥပဒေ( ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် ၂) အရ.. လူတွေသေနတ်ကိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေ..
အဲဒီသေနတ်.. လူရူးလက်ထဲရောက်တော့.. လူတွေသေတာပေါ့..
အဲဒါကြောင့်.. အခုသေနတ်ကို..ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာ.. အပြင်းအထန်ကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်..
သေနတ်ကြောင့်အခု..ကလေးတွေအသတ်ခံရတာမြင်တာ.. သေနတ်ကြောင့် ကလေးသိန်းချီအသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့တာလည်း. ထည့်ပြောသင့်တာလည်းရှိပါသေးတယ်..
မြန်မာပြည်လည်း..လူတိုင်း..လွတ်လပ်စွာ သေနတ်ကိုင်ခွင့်.. ပြဌာန်းသင့်ကြောင်း..။
” သမ္မတလင်ကွန်းလက်ထက်မှာ.. ခွဲထွက်တဲ့အုပ်စု(Confederate States of America – South)နဲ့.. ဖယ်ဒရယ်(Unoin – North)နဲ့..အကြီးအကျယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲ..
ဒါကိုတော့.. သိထားရလ်ိမ့်မယ်.. ”
ဆိုတော့ကာ အုပ်စုတောင့်ရင် (တစ်နည်းအားဖြင့် လက်နက်အင်အား လူအင်အားပြည့်စုံရင်) ခွဲထွက်ဖို့လုပ်ဆောင်တာ အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ဒါက စီးပွားရေးတောင့်တင်းရင် ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပေါ့။
” မြန်မာပြည်လည်း..လူတိုင်း..လွတ်လပ်စွာ သေနတ်ကိုင်ခွင့်.. ပြဌာန်းသင့်ကြောင်း..။ ” အဲဒီလိုသာဆိုလို့ကတော့ အခုလက်ရှိ လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် စည်းကမ်း ပညာရေးအခြေအနေနဲ့ တရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပုံတွေနဲ့တော့ မြင်ယောင်မိပါသေးတယ်။
အိမ်ထောင်စုတခုမှာ.. လူ၅ယောက်ရှိပြီး.. ၅ယောက်လုံးက..ရပ်ကွက်ထဲကထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်.. ပေးထွက်ရမှာပါပဲ..။ တားခွင့်Rights ဘယ်သူ့မှာမှ မရှိသင့်ပါ..။
ရပ်ကွက်အလုပ်ချုပ်ရေးရဲ့.. အလုပ်က.. အဲဒီခွဲထွက်.. ၅ယောက်လုံး သဘောတူနေမနေစစ်ဖို့ပါ..။
အဟမ်း.. ခွဲထွက်အိမ်ရဲ့ရှေ့က.. လမ်းကရပ်ကွက်ပိုင်တာနော..။နောက်ဖေးလမ်းကြားကလည်း.. ရပ်ကွက်ပိုင်တာပဲ..
ဘေးအိမ်တွေကလည်း.. တရက်ကွက်သားတွေ.. ။
မနက်က မအားတဲ့ကြားက ကွန်မင့်အရှည်ကြီးရေးပြီး ဆပ်မစ်ထည့်လိုက်တာ
ဘာပြောကောင်းမလဲ ပလုံ ကနဲ နေတာပဲ…။
ကျုပ်က သူကြီးရဲ့အာဘော်အားလုံးနီးနီးနဲ့ ကွဲလွဲပေမယ့်
ပြည်နယ်တွေရဲ့အမည်ကို အင်အားကြီးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမည်တွေ မပေးသင့်တာပါ။
သဘောက ကချင်ပြည်နယ်ကို ကချင်ပြည်နယ်လို့နာမည်ပေးထားတော့ အဲဒီပြည်နယ်ကို ကချင်တွေအုပ်ချုပ်မှ မှန်သလို တရားသလိုဖြစ်နေတယ်။ တကယ်က ပြည်နယ်တိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ရောထွေးပြီးနေတာ။ ဥပမာ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဗမာ အများဆုံး။ မွန်ပြည်နယ်မှာ ကရင်အများဆုံး…။
ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၁၄ ခု ဆိုတာကို မေ့ပစ်လိုက်…။
ပထ၀ီအနေအထား မြေမျက်နှာသွင်ပြင် လူဦးရေ အချိုးအစားအလိုက်ချိန်ဆပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်နယ်တွေ ပြန်ခွဲ..။
ကျုပ်သဘောဆို ပြည်နယ် ၂၂ ခု သို့မဟုတ် ၂၄ ခုလောက် ခွဲသင့်တယ်။
ရန်ကုန်ပြည်နယ်။ စစ်တွေပြည်နယ်။ နေပြည်တော်ပြည်နယ်။ ဖားအံပြည်နယ်။ တောင်ကြီးပြည်နယ်။ အဲဒါမျိုး….။
ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ပြည်သူ့ဆန္ဒမဲနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်အစိုးရတွေက အုပ်ချုပ်။(သူ့ဟာသူ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်။ ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်- လူဖြစ်ဖို့နဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝဖို့အဓိက)
အဲဒါတွေကိုမှ စုစည်းပြီး နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာ နိုင်ငံတော်အဖြစ်ဖွဲ့စည်း။
အဲဒါ ဖက်ဒရယ် ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတော့မသိဘူး….
အခုလို ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှ ဆိုတဲ့ လူမျိုးစွဲဝါဒမျိုးကို မစွန့်လွှတ်ပဲ အလျှော့အတင်းလုပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးယူလို့ကတော့ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်မှာပဲ..။
အရင်ကတည်းက ဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေ မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ (မုန်းရက်နဲ့) ကချင်စစ်အာဏာရှင်တွေရန်ကိုကြောက်လို့ ပြေးလာရတဲ့လူတွေ မန္တလေး မေမြို့မှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲပါ။
ရန်ကုန်မှာကို အများကြီးပါ နော…။
ရှင်ကြီးဝမ်းရော ရှင်ငယ်ဝမ်းရော အတူတူပါပဲ..။
လူကိုလူလိုမြင်တဲ့၊ လူကို လူလိုတန်ဖိုးထားတဲ့၊ လူကိုလူလိုလေးစားတဲ့
လူလူချင်း တစ်ဦးအခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးက အပြန်အလှန်လေးစားတဲ့
ဒီမိုကရေစီ စံနစ်သည်သာ မှန်ကန်မျှတ တန်းမြင့်တဲ့ လူ့ဘောင်ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ပါကြောင်း…..။
မဆီမဆိုင် ညကစဉ်းစားနေတာ..ဖက်ဒ်ရယ်ဆိုရင်…နယ်နိမိတ်တွေ အမည်တွေ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ အသစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်မှ ပိုသင့်တော်မယ် ဘယ်လိုပြန်လည်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရင် ကောင်းမလဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာ မမီတဲ့ဦးနှောက်ကလေးနဲ့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ဧရာဝတီကို အလယ်ထားပြီး အရှေ့ဘက်ခြမ်း အနောက်ခြမ်း၊ အထက်ပိုင်း အောက်ပိုင်းခွဲ။ အဲဒီကမှ ထပ်ပြီးခွဲ။ ဘယ်နှစ်ပိုင်းခွဲမလဲ ဒေသရဲ့အမည်တွေဘယ်လိုပေးရမလဲပေါ့။ တစ်ချို့နယ်မြေအတွက် မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတပေါမယ်။ တစ်ချို့အတွက် ရေပေါ်ရေအောက်သယံဇာတ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိမယ်။ တစ်ချို့နယ်မြေအတွက် အဲဒီလိုသယံဇာတအခွင့်အလမ်းနည်းပါးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာခဲ့ဘူး။ အခုဦးဦးပါလေရာ ရဲ့comment လေးဖတ်လိုက်ရတော့မှ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားသလိုပဲ။
ဆက်စပ်သတင်း.. မှတ်တမ်းကျန်အောင်.. တင်ပေးလိုက်တာပါ…။
ဗမာစစ်အစိုးရရဲ့ သွေးထိုးမှု့နဲ့ ဖြစ်လာတယ်လို့ဘဲ မှတ်တယ်
( ယင်းလှုပ်ရှားမှုကို ကယားပြည်နယ် ၈၈ မျိုးဆက် လူမှု အကျိုးပြု ကွန်ယက်က
ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး )
တစ်ခါတစ်လေ စစ်အစိုးရကို လုံးဝလျှော့တွက်လို့မရဘူးလို့ ဆိုခြင်ပါကြောင်း။
ကချင်တွေလည်း ဇာတ်နာ နေပါပြီဗျာ။
ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ လွှတ်တော် ထဲ ကနေပြီးတော့ ပဲ…ဖဒရယ် မူကို ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသား တွေလည်း အခု ဆွေးနွေးနေကြပြီပဲလေ။
ဖဒရယ် မူ အစိုးရ သစ် ဖြစ်ဖို့ နီးလာပါပြီ။
” ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ လွှတ်တော် ထဲ ကနေပြီးတော့ ပဲ…
ဖယ်ဒရယ် မူကို ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ”
ကချင်တွေ လွှတ်တော်ထဲမှာ တင်ပြခဲ့တာ ကြာပေါ့ ၊
ဘာမှမှ ထူးမလာတာ ၊ ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲ ။
အဓိက အချက်က များများ မရှိဘူး ၊ တစ်ချက်ပဲရှိတယ် ။
ဖယ်ဒရယ် ကို လက်ခံမလား ၊ လက်မခံဘူးလား ။
ဖယ်ဒရယ် ကို လက်မခံဘူး ဆိုရင်တော့ ၊
ရှိသမျှ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အားလုံး ( အားလုံး ) က စစ်ပြန်တိုက်ကြမှာပဲ ။
ဘယ်သူ နိုင်မယ် ရှုံးမယ် ကိစ္စ ခဏ ထားအုံး ၊
ပြည်တွင်းစစ်သာ ဆက် ဖြစ်နေပြီး ၊
အခုလိုပဲ စစ်အသုံး စားရိတ်ကို ၄၀ % အထက် သုံးနေရရင်တော့ ၊
အဲဒီ နိုင်ငံ ဒီ တစ်သက် မတိုးတက် မှာ ကတော့ သေချာပေါက်ပဲ ။
အဲဒါ ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်သား တွေလည်း ၊
မိန်းမ တွေက တရုတ်ပြည် ယိုးဒယားပြည် မှာ ဆက်အရောင်းစားခံကြ ။
ယောက်ျား တွေက ယိုးဒယားပြည် မလေးရှားပြည် မှာ ဆက်ကျွန်ခံကြ ။
ဒါတွေပဲ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲ ။
ထွက်ပေါက်က တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ။
အမေစု အာဏာရရင်တော့ မဆိုးဘူး ။
အမေစု က Federal စံနစ် ကို ထောက်ခံထားတယ် ။
အမေစု အာဏာက ဘယ်လို ရချင်တာလဲ အဘရယ်….
ဖက်ဒရယ် ကိစ္စ ကတပိုင်းပေါ့လေ…….
ဖြစ်သမျှ ကိစ္စ အားလုံး အမေ့ပေါ် ပုံတင်တာတော့ သိပ် ဘ၀င်မကျလှဖူးကွယ်…….
ပီးတော့ ဖက်ဒရယ်ရဖို့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာတော့ ယုတ္တိ မရှိလှပါဖူး…….
သေချာတာတော့ ဖက်ဒရယ် မရရင် တိုက်ပီးယူမှာတော့ တိုင်းရင်းသားတိုင်းမဟုတ်ပါ……..
အဘက စစ်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ မသိဖူးကွယ်….
ကို တိမ်မည်း ၊
မတွေ့တာတောင် တော်တော်လေးကြာနေပြီ ။
” သူလည်း အသက်ကြီးလှပါပီ ”
ဟုတ်တယ် ၊ အမေစုလည်း အသက်ကြီးလှပါပီ ၊ နားသင့်ပါပြီ ။
သို့သော် သူ့လောက် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လဲရှိ ၊
လူထုကော တိုင်းရင်းသားတွေကပါ ယုံကြည်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ရှိမှမရှိတာ ။
အစားထိုးစရာ ခေါင်းဆောင် မရှိတော့လည်း အမေစုကိုပဲ ဆက်ခိုင်းရမယ့်ပုံ ရှိတယ် ။
” ဖက်ဒရယ် ရဖို့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာတော့ ယုတ္တိ မရှိလှပါဖူး ”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိရှိသမျှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊
နာဂ ကအစ ၊ ဓါးရှိ ဓါးနှင့်ခုတ် ၊ လှံရှိ လှံနှင့်ထိုး ဆိုသလို ၊
ရရာလက်နက် စွဲကိုင်ပြီး ၊ လက်နက် အင်အား မမျှတမှန်း သိပေမယ့် ၊
ဗမာ အစိုးရကို တစ်ခဲနက် ( တစ်ခဲနက် ) ဝိုင်းဝန်း ပုန်ကန်နေကြတာ ၊
ဘာ အတွက်ကြောင့်များ ထင်နေလို့လည်းကွယ် ။
တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်လောက် အ တယ်ပြောပြော ၊
သေနတ်မှန်ရင် ပရုပ်ဆီ လူးလို့ မပျောက်ဘူး ဆိုတာတော့ သိကြပါတယ် ။
ဘိန်းစိုက် ဆက်ကြေးတောင်းရုံသက်သက် ဓါးပြသာသာ အဖွဲ့တွေဆို ၊
လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု မရပဲ ပျောက်သွားတာ ကြာလှပေါ့ ။
အဖွဲ့ တစ်ခုဟာ နှစ်ရှည်လများ သက်တမ်းရှည်လာပြီဆိုရင် ၊
အဲဒီ အဖွဲ့မှာ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ခံယူချက် ရှိတာသေချာသပေါ့ ။
အဘ ကတော့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေရဲ့ ဘုံ တောင်းဆိုချက်ဟာ ၊
ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ( သို့ ) Federal စံနစ်လို့ ထင်တာပဲ ။
အဘ အနေနှင့်ကတော့ ၊ ဦးတည်ရာ မရောက်မှီမှာ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၊
အဘတို့ အမျိုးသား ခေါင်ဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၊
သဘောတူ ကတိပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ၊ တရားမျှတတဲ့ Federal စံနစ်ကြီးကို ၊
တည်ဆောက်ပေးမှသာလျှင် အဘ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မျက်နှာကို မဖျက်ရာ ရောက်မယ် ထင်တာပဲ ။
လက်ရှိ ခေတ် / အခြေအနေတွေနှင့် လျှော်ညီအောင်တော့ ၊
အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုတော့ ဆက်ညှိနှိုင်းရအုန်းမှာပေါ့လေ ။
ဒါဟာ ၊ အမေစုပြောပြောနေတဲ့ ဒုတိယ ပင်လုံ ညီလာခံ ဆိုတာပါပဲ ။
ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ပေးတဲ့ Federal အခြေခံပေါ်မှာ တည်ဆောက်ကြမယ် ဆိုရင် ၊
တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း ညှိမရလောက်အောင် ရိုင်းမယ် မထင်ပါဘူး ။
” အဘက စစ်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ မသိဖူးကွယ် ”
အဘ က စစ်မဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ Federal ကိုပေးခိုင်းနေတာပေါ့ကွယ် ။
လေးဇားဇွာဖြင့် အစီရင်ခံ တင်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ကချင်လူမျိုးစုဝင် ဂျိမ်းဖော ၊ ရဝမ် ၊ လီဆူး ၊ …… စတဲ့ လူမျိုးကွဲတွေ ရှိဂျဘာဒယ် ခင်ဗျား၊ အဲ့ဒီလူမျိုးကွဲတွေဟာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာချင်းလည်းမတူ (ခရစ်ယာန် ၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ ၊ ဗုဒ္ဓ) စသဖြင့်ကွဲလွဲဂျဘာဒယ်။ စာပေ ၊ဘာသာစကားလည်း မတူဂျဘာဘူး။
အဲ့ဒါဂို ဘယ်လူမျိုးစုရဲ့ ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးဘာသာဇဂါး အဖြစ် ဖော်ပြချင်ပါသလဲ ခဗျား။
နောက်ပီးဒေါ့ ကချင်မျိုးနွယ်စုထဲမှာ မပါဒဲ့ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) တွေကလည်း လူအူးရေ တော်တော်များဘာဒယ်ခဗျ။အဲ့ဒီဒေါ့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေဒဲ့ ရှမ်းနီဒွေဂို ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရပါမလဲခည။ ကျန်အခြားတိုင်းရင်းသားဒွေဂို သူဒို့ ပြည်နယ်ဒွေဂို ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်ရမလား ခည။
ပြီးခဲ့သော ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်လည်း ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရှမ်းနီလူမျိုးများမှ KIA အပေါ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၄င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း KIA အဖွဲ့သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရှမ်းနီလူမျိုးများအား မတရားနှိပ်စက်နေကြောင်း၊ ရွာသားများအားလည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး အဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းကြောင်း၊ ရှမ်းသမီးပျိုများအားလည်း မုဒိန်းကျင့်ကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်သို့လည်း ရောင်းစားကြောင်း၊ ဆက်ကြေးငွေများလည် မတရားတောင်းခံကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် KIA အဖွဲ့သည် ကချင်ပြည်နယ်အား ကိုယ်စားမပြုကြောင်း၊ KIA အဖွဲအား ဒေသခံရှမ်းနီလူမျိုးများမှ တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
၄င်းတို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသကဲ့သို့ KIA အဖွဲ့တွင် ကချင်လူမျိုးများစွာ မတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ခံရခြင်းကြောင့် ရှိကြသော်လည်း KIA အဖွဲ့အား တကယ်တန်း အုပ်ချုပ်နေသူများမှာ ဂျိန်းဖော လူမျိုးများသာ ဖြစ်သည်။ အစဉ်အဆက် KIA ခေါင်းဆောင်များမှာ ဂျိန်းဖောလူမျိုးများသာ ဖြစ်ကြပြီး အခြား ကချင် မျိုးနွယ်စုများအား အရေးပါသော ရာထူးများပေးထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဂျိန်းဖောလူမျိုးများသာလျှင် ကချင် ပြည်နယ်အား အုပ်စိုးရမည်ဆိုသော လူမျိုးကြီး ၀ါဒအား အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ KIA သည် ကချင် ပြည်နယ်အား ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ၊လက်တွေ့တွင်မူ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးမှ KIA ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကချင်လူမျိုးများအား ကိုယ်စား မပြုသော KIA အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ကချင် လူမျိုးများ၏ သဘောဆန္ဒအတိုင်း အစိုးရမှ ကမ်းလှမ်းလျှက် ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်ခံပေးရန် ကချင်ပြည်သူများ ကိုယ်စားတောင်းဆို လိုက် ရပါသည်…………….
အဲ့ဒီဇခုန်တိန့်ယိန်း ဆိုဒါဂ NDAK ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါခည
ရှမ်းနီဒွေရဲ့ သဘောထားကိုလည်း သိရအောင် တင်ပေးလိုက်ရဘာဒယ် ခညားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကချင်-မြန်မာစစ်က.. ကချင်တွေပိုင်ခွင့်.. မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်ခွင့်ကို..မြန်မာတွေဝင်ရှုပ်တာက.. စဖြစ်တာလို့.. စစ်ဖြစ်တိုင်မ်းလိုင်းကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတယ်..
ကချင်က.. ချိုင်းနားဆီက.. အဲဒါကြီးဆောက်ခွင့်ပေးတာမို့.. ဒေါ်လာသန်းချီရထားမှာပေါ့..
အဲဒါကို.. ဗမာတွေက၀င်ရှုပ်တာမို့.. ပြည်တွင်းစစ်ထဖြစ်တာလို့.. ထင်တယ်..
တွေးကြည့် ချိုင်းနားကပေါ့.. ဆိုတာ..အသိသာကြီး..။
ပြည်တွင်းစစ် မြန်မြန်ရပ်ချင်ရင်.. မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စကို.. ဖယ်ဒရယ်အဆင့်.. ပြန်စဉ်းစားပြီး လုပ်ခိုင်းရလိမ့်မယ်..။
ရပ်ကွက်တခုထဲအတူတူနေကြသူချင်းအတူတူ.. သူများအိမ်ထဲ.. မီးဖိုချောင်စင်ရိုက်တာ.. ဘေးအိမ်က၀င်မရှုပ်ဖို့..လိုပါတယ်..လိုပါတယ်..။
ကို ဘဲဥ ရေ ။
အပေါ်က ကိုတိမ်မည်းကို ပြန် ရှင်းထားတာတွေလိုပါပဲ ။
၁ ။ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ပေးတဲ့ Federal အခြေခံပေါ်မှာ
တည်ဆောက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
၂ ။ လက်ရှိ ခေတ် / အခြေအနေတွေနှင့် လျှော်ညီအောင်တော့ ၊
၃ ။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၊
” Majority Rule, but, minority right ” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ၊
အများစု က အုပ်ချုပ် သော်ငြားလည်း ၊ အနည်းစု ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို မထိပါးစေပဲ ၊
ကချင်ပြည်နယ် မှာ ဂျင်းဖေါ လူများစုက အုပ်ချုပ်နေမယ် ဆိုရင်တောင် ၊
တိုင်းလိုင် ( ရှမ်းနီ ) အနည်းစုရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို မထိပါးစေအောင် ၊
ဖွဲ့စည်းပုံကို သေချာ ရေးစွဲပေးရမှာပေါ့ ကွယ် ။
အဲဒီ ကိစ္စတွေကို အမေရိကန်ကြီးဆီက အတုယူသင့်တာတွေ ရှိမယ်ထင်မယ် ။
ဥပမာ ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ လူမျိုး တစ်မျိုး ဟာ ပြည်နယ်လူဦးရေ ရဲ့ ၁၀ % ရှိရင် ၊
သူတို့ စကားကို ရုံးသုံးခွင့် ပေးတာတို့ ၊
သူတို့ဘာသာ / လူမျိုးရေး နေ့မှာ ရုံးပိတ်ပေးတာတို့ ၊
( ရုံးသုံး ဘာသာစကားဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ၂ မျိုး ၃ မျိုး ဖြစ်လို့ရပါတယ် ။
အကုန် အကျများသွားမယ်လို့ ယူဆစရာရှိပေမယ့် စစ်ဖြစ်နေတာကမှ ပိုကုန်တာပါ )
သူတို့စာကို ကျောင်းသင်္ခန်းစာထဲ ထည့်ပေးရတာတို့ စသဖြင့်ပေါ့လေ ၊
သူကြီးကတော့ ပိုသိမယ် ထင်ပါတယ် ။
မီဒီယာ ဆိုတာ ပြည်သူ တွေကို အဆိပ် အခပ် နိုင်ဆုံး နဲ့ ကောင်းကျိုး အပြုနိုင်ဆုံး လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အခုလို online media လိုမျိုး မှာ အဲ့ဒီ့ သဘောတရား ကို ပိုတွေ့ ရပေမယ့် .. မြန်မာ နိုင်ငံ မှာတော့ အင်တာနက် သုံး တဲ့ လူဦးရေ က 1% ပါတဲ့ ..။ ဆိုတော့ ……… သူကြီး ကို မြန်မာ ပြည်ပြန်လာ ပြီး အဲ့ဒီ့ ဧရာဝတီ မြစ် တစ်လျှောက်ကြည့်စေချင်တဲ့အပြင် အဲ့ ဒီ့ မြစ်ကို မှီခို စားသောက် နေကြတဲ့ သတ္တ၀ါ (လူ အပါအ၀င်) စီးပွားရေး လုပ်ငန်း .. အဲ့ဒါလေးတွေ လေ့လာစေချင်တယ်။ ခုနှစ် နှစ်လောက် တည်ဆောက် ထားခဲ့တဲ့ တံတားတွေကို ခုနှစ် ရက်အတွင်း မိုင်းခွဲ မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက် ထွက် လာခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ အစည်း မျိုး … ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ မှတ်တမ်း ပဲ ..အဲ့ ပိုက်ဆံ တွေက ကျုပ်တို့ ပိုက်ဆံ တွေ နော် .. ကျုပ်တို့ ထမ်းထားတဲ့ အခွန် တွေ။ ဆိုတော့ .. …………………..
ခရီး စရိတ် သာ ရမယ် ဆိုရင် .. အဲ့ မြစ်ရိုး တစ်လျှောက် ထွန်းနေတဲ့ သောင် တွေ ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီး ပြ ချင်သား ဗျာ ….. ကိုယ်ချင်းစာတတ် အောင်ပါ …။
ကျုပ်က.. ဘူမိဗေဒ.. ပါတ်ဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တော့မဟုတ်..
မြင်မိသလောက်.. အာတိတ်က..ရေခဲတောင်တွေ.. ဟိမ၀န္တာက..ရေခဲတွေအကြီးအကျယ်ပျော်ကျနေတယ်..
ဧရာဝတီရဲ့.. အဓိကရေဝေရေလဲသစ်တောနဲ့..ရေရတဲ့အရင်းအမြစ်ဟာ..ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောဖြစ်တဲ့.ကချင်ပြည်မြောက်စွန်းက. .နှင်းတောင်တွေပဲ..။ အဲဒီကသစ်တောကြီးတွေပဲ..
သစ်တောကြီးတွေလူခုတ်လို့.. ပြုန်းနေချိန်.. နှင်းတောင်တွေကအရေပျော်လာတာမို့.. ဧရာဝတီရဲ့တကယ့်(တကယ့်) အနာဂါတ်ဟာ.. တော်တော်မရေမရာပါ..
ဒါကြောင့်.. ပြီးခဲ့တဲ့..၁၀စုနှစ်အတွင်း..သတင်းတွေစီကြည့်ချရင်.. ဧရာဝတီက.. ရေကြီးတာနဲ့..ရေပါး..သောင်ထွန်းတာတွေ..တောက်လျှောက်ဖြစ်လာတာ.. တွေ့ရလိမ့်မယ်..။
လူသားစွမ်းအားဟာ.. သဘာ၀၀န်းကျင်ဂေဟစနစ်ကို.. ဖျက်စီးနိုင်သလို.. ပြန်လည်းပြုပြင်နိုင်ပါတယ်..
ဘာမှမလုပ်.. သဘာဝထိမ်းသိမ်းသူကြီးတွေပါဆိုပြီး.. ထိုင်ကြည့်နေရင်.. လူ့စွမ်းအားမရှိ.. ငပျင်း..ငတုံးတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့..
ဧရာဝတီကို တကယ်(တကယ်)ကယ်ချင်ရင်.. ဆည်ဆောက်သင့်တယ်ထင်ကြောင်း..
ရေစီးရေလာကို.. လူ့စွမ်းအားနဲ့..ထိန်းကြောင်းရတော့မယ်..(ရတော့မယ်) ယူဆကြောင်း..
မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်ရန်ဆော်သြခြင်းမဟုတ်.. သိနားလည်သူ..ပညာရှင်တွေနဲ့သေသေချာချာ(သေသေချာချာ) တိုင်ပင် ..လူစွမ်းအားနဲ့ တခုခု.. လုပ်သင့်နေချိန်ဖြစ်ပါကြောင်း.. :528:
How would Mount Everest change due to global warming? – Curiosity
curiosity.discovery.com › … › Ecology and the Environment
Evenavery small increase in temperature could change the climate of Mount Everest. Melting ice and snow could cause glacial lakes to burst, which would lead …
Arctic sea ice melts to lowest level on record | Reuters
Sep 19, 2012 – WASHINGTON (Reuters) – Arctic sea ice,akey indicator of climate change, melted to its lowest level on record this year before beginning its …
” ခုနှစ် နှစ်လောက် တည်ဆောက် ထားခဲ့တဲ့ တံတားတွေကို
ခုနှစ် ရက်အတွင်း မိုင်းခွဲ မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက် ထွက် လာခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ အစည်း မျိုး ”
ကို M လုလင်ရဲ့ ။
အဘ သိသလောက်လေးပြောပြမယ်နော် ။
Gorilla Warfare ပျောက်ကျားစစ် အခြေခံ ကျင့်စဉ် / စစ်သဘောတရား တွေမှာ ၊
တံတားချိုး ၊ ရထားလမ်းချိုး အလုပ်တွေဟာ လုပ်ကို လုပ်ရမယ့် အချက်တွေကွယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အခု KIA ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရဲ့နေရာမှာ ၊
အဘ သော်၎င်း ၊ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်သော် ၄င်း ၊
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားသော် ၄င်း ရောက်နေရင်လည်း ၊
တံတားတွေက ချိုးကို ချိုးရမှာပဲလေ ။
ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားစဉ် အမျိုးသား ညီလာခံ လုပ်နေတုန်းက ၊
စစ်တပ်ဘက်ကကော သူပုန်ဘက်ကပါ ကိုယ့်အကြံနှင့်ကိုယ် ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေကြတာပါ ။
စစ်တပ်ဖက်က တံတားတွေ လမ်းတွေ ကို အမြန်ကို ဆောက်ထားတယ် ။
သူပုန်ဖက်က ပညာတတ်တွေကို လူစုတယ် ၊ လက်နက်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံ ကြိတ်စုတယ် ။
ဘယ်သူက ပို အကျိုးမြတ်ရသွားသလဲကတော့ မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ ။
” ကချင်တွေပိုင်ခွင့်.. မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်ခွင့်ကို..
မြန်မာတွေ ၀င်ရှုပ်တာက.. စဖြစ်တာလို့..
စစ်ဖြစ် တိုင်မ်းလိုင်း ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချမိတယ် ”
သူကြီးရဲ့ ကောက်ယူချက်လေးကလည်း ချဲ့ထွင် စဉ်းစားစရာပဲ ။
မှန်တယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆည်သွားဆောက်တာ ၊
တရုတ်ကြီးက KIO ကိုလည်း ပိုက်ဆံပေးလိမ့်မယ် ထင်တယ် ။
တရုတ်ကြီးက သူက ပေးစရာရှိတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ပေးနေတာ တွေ့ရတယ် ။
ခက်တာက ကြားအဆင့်တွေမှာ ပျောက်ပျောက်သွား တာ ဆိုးတာ ။
အခုလည်း ၊ တရုတ်ကြီးက ပြောနေပြီလေ ၊
ကျောက်ဖြူ ဒေသ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ၊
အစိုးရ ကို သူက ဒေါ်လာ ဆယ်သန်း ပေးထားပြီးသားပါတဲ့ ။
အဲဒီ ဒေါ်လာ ဆယ်သန်း ကျောက်ဖြူ ဒေသ ကို မရောက်တာကတော့ ???
မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စနဲ့ သူများအိမ်ထဲ မီးဖိုချောင်စဉ်ဆောက်တာ အခြေအနေခြင်း အဓိပ္ပါယ်ခြင်း လုံးဝခြားနားတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ လိုရာကိုဆွဲပြီး လုံးဝမဆက်စပ်ပဲ အတင်းဆက်စပ်နေတာ နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပဲ။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်။ နယ်မှာ လယ်မြေတွေအတွက် ရေမြောင်းနဲ့ရေပေးတယ်။ အထက်ကလယ်သမားတွေက လောဘကြီးပြီးတော့ မြောင်းကိုတစ်ဝက် (သို့) အကုန်ပိတ်ပြီး သူ့လယ်ထဲရေမြန်မြန်ပြည့်ဖို့လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ အောက်ဖက်ကို ရေဆင်းနည်းသွားတယ် (သို့) ရေပြတ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ လယ်သမားတွေကလည်း ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူတုတ်လုပ်ထားလဲဆိုပြီး အထက်တက်ရှာ တွေ့တော့ အဲဒီတုတ်ကို ဖယ်ချပစ်ရမှာပဲ။ သူကပဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုလုပ်သေး တုတ်ကိုဖွင့်တဲ့သူကိုလည်း ရန်လုပ်သေး။ ဒါမှန်ကန်ပါသလား။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် သူ့လယ်ထဲလည်း ၀င်တာပဲ။ ဒါကို အောက်ဖက်ကလယ်သမားတွေကို ကိုယ်ချင်းမစာ မတရား ငါ့လယ် ငါ့နယ်မြေနားကမြောင်းကို တုတ်လုပ်တာ ဘယ်သူမှပြောခွင့် တားဆီးကန့်ကွက်ခွင့်မရှိလို့ ငါတကော ကောတာမျိုးက လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးလား။ အဲဒါမျိုးကို လျှော်ကြေးပေးဖို့ တန်ဖိုးကို အဘယ်ကဲ့သို့ဖြတ်မှာပါလဲ။ သူအဲဒီလို ရေမြောင်းကိုတုတ်လုပ်လိုက်လို့ အောက်ဖက်ကလယ်သမားတွေအတွက် ထိခိုက်နစ်နာသွားမှာမျိုးကို အောက်ကလယ်သမားတွေကပြောတာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်တာဟာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာပါလား။
ကျုပ်အဖြေအနေနဲ့.. အပေါ်ထိပ်ပိုင်းမှာ ကိုရင်Mလုလင်ရဲ့.. ကန်ထရိုက်တိုက်နမူနာကိုဖြေထားတာလေး ပြန်ဖတ်ပေးပါနော..
ကျုပ်နားလည်သလောက်.. ဧရာဝတီမြစ်လိုမျိုးက. ဖယ်ဒရယ်ကနေ.. ဆိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတဲ့.. ဥပဒေမျိုး.. ပြဌာန်းထားသင့်ပါတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. ဖယ်ဒရယ်ပိုင်မြေတွေကို.. မြေပုံနဲ့ကိုတင်ပြထားတယ်..။
ကမ္ဘာမှာ.. မြစ်ရေကို ခွဲဝေသုံးစွဲရတဲ့.. နိုင်ငံတွေအများကြီးပါ..။
.. တနိုင်နိုင်ငံက..တန်းတူတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မညှိနှိုင်းပဲ.. ထညစ်ရင်.. စစ်ဖြစ်ရုံပါပဲ..
ကျုပ်က ဘယ်ဖက်ကမှ လိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး
တစ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ သံယံစာတတွေနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ စစ်လက်နက်တွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး
kai ကို လိင်ဗျံနဲ့သွားဆော်တော့ သူတို့ခံနိုင်လို့လား
ခုတော့လည်း ဌာနချုပ်ကို မတိုက်ဘူးပြောပြီး
ခြေကုတ်တောင်ကုန်းတွေကို ဆော်နေတာ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျကုန်ပြီ
တစ်ကယ်ဆော်ကြရင် သေနတ်ဖွက်ပြီး ဟိုဖက်ကမ်းထွက်ပြေးဘို့လမ်းဘဲရှိတယ်
တစ်ကယ်တန်းစစ်တိုက်နေရတဲ့ အောက်လက်သားတွေကတော့ ဘယ်သူမှစစ်တိုက်ခြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး
ဇာတ်နောက်လိုက်ကြလို့ ပြောလိုက်ပေါ့ ငခြောက်ရ
ဘာဖြစ်လို့ လက်နက်ကိုင်တဲ့ စစ်ထဲဝင်ကြသလဲ ????
နိုင်ငံတော် လုံခြုံ ရေးကို ထိပါးလာရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် စစ်ကတော့ တိုက်ရမှာပဲ။
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေတာတွေက ပိုက်ဆံတွေကုန်တယ်။
လူတွေ စစ်ပမ်းတယ်။ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်တယ်။ စစ်တပ်ကလည်း သူ့အခန်းကဏ္ဍ ကို မှေးမှိန် လာမယ့်အရေး ဘယ်တော့မှ အဖြစ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှာနေမှာပဲလေ။
ပြည်တွင်းမှာ ရှာမရရင် ပြည်ပ မှာ ထွက်ရှာ မှာပဲ။ အမေရိကန်တောင် အာဖဂန် ၊ အီရတ် မှာ စစ်မျက်နှာ ဖွင့်ခဲ့သေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးထက် ဆိုးကျိုးတွေ ပိုပြီးရခဲ့ တယ်။ စစ်ကတော့ နိုင် သွားတယ် ရယ်လို့ မရှိဘူး။
ကချင်မလေးတွေကိုတွေ့ ရင် နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဖေးမကူညီ ကြင်နာပေးချင်မိတာကလား
ကချင်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးဆိုပြီးတောင်းတဲ့ နယ်နမိတ်က ပေါ့သေးသေးမထင်နဲ့ 
စစ်ကိုင်းမြို့ အထိ ပါသတဲ့ဗျ
” ကချင်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးဆိုပြီးတောင်းတဲ့ နယ်နမိတ်က ၊
ပေါ့သေးသေးမထင်နဲ့ စစ်ကိုင်းမြို့ အထိ ပါသတဲ့ဗျ ”
အဘ က ဘယ်လောက် Liberal ကျတယ် ပြောပြော ၊
ကချင်တွေ ပြည်ထောင်စုကြီးထဲ ကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ အထိ ဆိုရင်တော့ ၊
မထောက်ခံပါဘူး ။ နဲနဲတောင် ကန့်ကွက်တဲ့ဘက်က ပါနေဦးမှာပါ ။
ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တော့ ကန့်ကွက်ခွင့်က ရှိမှမရှိတာလေ ၊
မကျေနပ်ရင် ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတာ လူမျိုးတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးကိုးကွယ့် ။
အဲဒီတော့ကာ မကျေနပ်နေတဲ့ / အတူမနေချင်တော့တဲ့ တိုင်းရင်းသားများကို ၊
အတူနေချင်လာအောင် ဆွဲဆောင် ( ဆွဲဆောင် ) ဖို့က ၊
အတူနေချင် နေတဲ့ လူများစု ဗမာ လူမျိုးကြီး ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်လာတာပေါ့ ။
( ဗိုလ်ချုပ် လဲ အဲလိုပဲ ပြောသွားခဲ့တာပဲလေ ၊
၁၀ နှစ် အတူနေကြည့်လို့မှ အတူနေချင်အောင် မဆွဲဆောင်နိုင်ရင် မင်းတို့ ညံ့လို့ပေါ့တဲ့ )
၁ ။ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပြီး ဘတ်ဂျက်ရဲ့ ၄၀ % ကို စစ်စရိတ် သုံးနေရရင် ၊
အဲဒီ နိုင်ငံဟာ ဘယ်လိုမှ မတိုးတက်နိုင်ပါဘူး ။
၂ ။ အဆိုးဆုံး အချက်က ၊ စစ်အတွင်းမှာ ကျဆုံး ဒါဏ်ရာရ သွားတဲ့
ကချင်စစ်သား ၊ ဗမာစစ်သား ၊ အရပ်သား တွေအားလုံးဟာ ၊
( အများစုက တကယ့် အရွယ်ကောင်းတွေ နော် )
နိုင်ငံကို တိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ဖို့ တကယ့် အရင်းအမြစ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတာပါ ။
၃ ။ ဗမာ လူမျိုးတွေ အနေနှင့်လည်း ၊
တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ထွက်တဲ့ သယံဇာတ တွေကို မှီခိုနေစရာ မလိုပဲ ၊
ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မှာ ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
၄ ။ အဲဒီတော့ကာ စစ်မဖြစ်ပဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အတူနေနိုင်မယ့် ၊
တစ်ခုတည်းသော ဖြေရှင်းချက်ဟာ Federal စံနစ် ပဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုက Federal စံနစ်ဟာ တရားမျှတ တယ်လို့လဲ ယူဆပါတယ် ။
ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေကို Federal ပေးသင့်ပါတယ် ။
အသေးစိတ် တွေကတော့ ခေါင်းဆောင်တွေ ညှိကြပေါ့လေ ။
တကယ်က ၊ သိပ်တော့လည်း မစိုးရိမ်လှပါဘူး ။
တရုတ်ကြီး ရဲ့ သြဇာကို မလှန်နိုင်တဲ့ မြန်မာ အစိုးရ နှင့် ၊
တရုတ်ကြီး ရဲ့ သြဇာကို မလှန်နိုင်တဲ့ KIO အဖွဲ့ ၊
တရုတ်ကြီး နားညီးလာတဲ့ ၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာတဲ့ တစ်နေ့ ၊
နှစ်ဘက်စလုံးကို ရပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ၊ စစ်ပွဲ ရပ်သွားမှာ သေချာပါတယ် ။
( အခုတောင်မှ တရုတ်နိုင်ငံသား ကချင်တွေ တရုတ်ပြည်မှာ ဆန္ဒပြလာကြပါပြီ )
အရင်ကလည်း အဲဒီလို ကိစ္စ ဆန်ဆန် ဖြစ်ဘူးပါတယ် ။
ရှမ်းမြောက် ကချင် တပ်မဟာ (၄) ဒေသကို ဗကပ တွေ ဝင်လာတုန်းက ၊
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) နှင့် ဗကပ တခြိမ်းခြိမ်း ချကြသေးတယ်လေ ။
အဲဒီအချိန် ( ၁၉၇၃ ) မှာ ကေအိုင်အေ က ဗမာအစိုးရ နှင့်တောင် စေ့စပ်ပြီး ၊
ဗကပ တစ်ဖွဲ့ထဲကို ဦးတည်ပြီး ချဖို့ လုပ်သေးတာပဲ ။
တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းသလား မမေးနှင့် ၊
ကေအိုင်အေ ကိုစထောင်တဲ့ ဇော်ထူး ၊ ဇော်ဆိုင်း နှင့် ဇော်ဒန် ညီအစ်ကို ၃ ဦး ထဲက တစ်ယောက် ၊
တပ်မဟာ (၄) မှူး ဇော်ဒန်တောင် ဗကပ နှင့် တိုက်ပွဲ မှာ ကျ သွားသေးတာပဲ ။
နောက်ဆုံး တရုတ်ကြီး မျက်စိတော်တော် နောက်လာတဲ့အချိန် ၊
တရုတ်ကြီး Pressure နှင့် နှစ်ဘက် စလုံးကို တော်ကြတော့ ဆိုပြီး ရပ်ခိုင်း ညှိခိုင်း လိုက်တော့မှ ၊
၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်ရုံတင် မကဘူး ၊ မဟာမိတ်ပါ ဖြစ်သွားတာလေ ။
အဲဒီတော့ သိပ်စိတ်မပူပါနှင့် ၊ တရုတ်ကြီး ဝင်ပါလာတဲ့အချိန်ကျရင် ၊
ဗမာ အစိုးရ နှင့် ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ်ရပ်ရုံတင် မကဘူး ၊
မဟာမိတ်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ် ။
ဖဒရယ် ဆိုတာက ရော့အင့် ဆိုပြီး ကောက်ပေးလို့ ရတဲ့ မုန့်ပဲသရေ စာမဟုတ်ဘူး ဗျ။
ခိုင်မာတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ( နိုင်ငံတော်အဆင့် နဲ့ ပြည်နယ်အဆင့် ) ရေးဆွဲပြီးမှ …..
ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် ။ ယှဉ်ပြိုင် ။ နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ က ပြည်နယ် အစိုးရ ဖွဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ဖို့လိုတယ်လေ။
လွှတ်တော်ကြီကို ပစ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ပဲနဲ့ အလိုလို အာဏာ ရချင်ရင်တော့ စစ်သာ
နိုင်အောင်တိုက်ရုံပဲရှိတယ်။ အစိုးရဖက်က ဖဒရယ် ကို ရော့ အင့် ဆိုပြီးပေးလိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘယ်တော့မှ လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ချင်ရင် စစ်သာတိုက်ကြပေတော့။
ဒီလိုလုပ်ပါလား ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာကတော့ ပြောရရင်
ဘင်္ဂါလီက ကလားနိုင်ငံ
လက်ရှိ တိုင်းရင်းသားခွဲထွက်ရေးတစ်ခုရဲ့ ဥပမာ ကချင် ( တစ်မျိုးမျိုးပေါ့ )
သူတို့လိုခြင်တဲ့ ဖယ်ဒရယ်သဘောကို ပိုစ့်တစ်ခုလောက်တင်ပေးပါလားခင်ဗျ
တစ်ဝက်ထောက်ခံ တစ်ဝက်ငြင်းပယ်ပါရစေ သုရှင်ရေ..
ဟုတ်ပါတယ် ဖက်ဒရယ်ကို အစိုးရက ရော့ အင့် ဆိုပြီး ပေးလိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင် (မဖြစ်နိုင်သေး) ပါဘူး
အခြေခံ ဥပဒေမှာ ဖက်ဒရယ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ (ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာခွဲဝေရေး) မူ တွေ ရေးဆွဲရပါအုံးမယ်.. ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်မသွားဖို့ ကာကွယ်တဲ့ အချက်တွေရောပေါ့..
လူမျိုးစုအမည်နဲ့ ပြည်နယ်တွေ ခွဲတာလည်း မကောင်းသေးပါဘူး ပြင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်
ဖက်ဒရယ်ရဖို့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဆိုတာတော့ ငြင်းပါရစေ.. စစ်တိုက်ပြီး ယူရမှာလို့လည်း အားမပေးလိုပါဗျာ..
တကယ်စစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်သားတွေကိုသာ မေးကြည့်ပါ စစ်တိုက်ပြီး ဆက်သွားမလားဆိုတာ.. အားလုံးက နိုးပဲ ဖြေမှာပါ
လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ .. ကျွန်တော်ပြောတာက… စစ်တိုက်ပြီး အခုလိုတောင်းဆိုနေမယ်ဆိုရင်..လို့
ပြောတာပါဗျာ။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး သဘောတူညီချက် ကို ရယူကြရမှာ မဟုတ်လားဗျာ။ ဖဒရယ် မူကို ကျွန်တော်တို့လည်း ထောက်ခံပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ထဲက တရုတ်နိုင်ငံသား ကချင်တွေ ဆန္ဒပြနေတဲ့ VDO တွေ တက်လာပြီ ။
( Jingpo ကချင် လူမျိုးတွေက မြန်မာပြည်မှာ ၄ သိန်း ၊ တရုတ်ပြည်မှာ ၄ သိန်း ရှိတယ်ပြောတယ် )
၁ ။ မျက်နှာထားတွေ တော်တော် တင်းမာတာ တွေ့ရတယ် ။
၂ ။ တရုတ်ရဲတွေက နွေးနွေထွေးထွေး ခင်ခင်မင်မင် နှင့်
ဆန္ဒပြမှုကို ရှင်းထုတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ် ။
ဒီအတိုင်း ဆက်ဖြစ်နေရင် တရုတ်နိုင်ငံသား ကချင်တွေပါ
မခံချင်စိတ်နှင့် Voluntary စစ်ထဲဝင်လာမယ် ထင်တာပဲ ။
ကောင်းပါတယ် ၊ တရုတ်ကြီး မြန်မြန်ဝင်မှ စစ်မြန်မြန် ရပ်မယ်ထင်တယ် ။
ကျနော့် အထင်တော့ သိပ်မကြာခင် စစ် ရပ်တော့ မယ်ထင်တယ် ။
ဗမာတွေ အမြန်ဆုံး စိတ်ထားပြောင်းပြီး Federal မြန်မြန်ပေးမှ ဖြစ်မယ် ။
အချိန်ဆွဲနေရင် တိုင်းရင်းသားတွေ အရမ်းစိတ်နာသွားပြီး ၊
တိုင်းပြည် အစိတ်စိတ် ကွဲသွားလိမ့်မယ် ။
ဗမာ အများစု ကလည်း Federal ပေးတယ် ဆိုတာကို နားမလည်ကြဘူး ။
အရှည်ကြီး ရှင်းပြရမလိုတော့ ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ ။
အမေရိကန် ဖက်ဒရယ် အကြောင်းနည်းနည်းသိချင်ရင်…
( ဗဟုသုတ ပေါ့ဗျာ )
နိုင်ငံတခုအတွင်းက နယ်မြေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ခွဲထွက်ခွင့်ဟာ
လူ့အခွင့်အရေး လို့ ကျုပ်ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားဖူးပါဘူး…။
အဲဒီကွန်ဗင်းရှင်းကို ဘယ်သူကလုပ်တာလဲ – ကုလသမဂ္ဂလား
အဲဒီကုလသမဂ္ဂက ဘယ်သူတွေ ဇတ်လိုက်လုပ်တာလဲ- စစ်နိုင်တဲ့ ငါးနိုင်ငံလား
အဲဒီစစ်နိုင်တဲ့ ငါးနိုင်ငံက အစက အရင်က ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ဖူးကြသလဲ၊ သူတို့ရုတ်တရက်ကြီး သူတော်ကောင်းလေသံဖမ်းပြီး ထ ပြောတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာတွေကို
ဘယ်လိုစံနှုံးမျိုးနဲ့ လိုက်နာခဲ့ကြသလဲ ??????
အဲဒီတုန်းကဟာတွေကိုထားလို့ မနေ့တနေ့ကတောင် လူ့အခွင့်အရေးဘိုးအေကြီးတနိုင်ငံက သူနဲ့မိုင်ရှစ်ထောင်ဝေးတဲ့ ဖေါက်ကလန်ကျွန်းကို မစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုပဲ
တိုင်းရင်းသားတွေ ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ် ခွဲထွက်တာဟာလူ့အခွင့်အရေး လို့
အဲသလို လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပြီး လျှောက်ခွဲထွက်နေရင် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲသွားမှာဖြစ်တယ်။
အဲသလိုကွဲသွားပြီးရင် နီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ သြဇာခံဖြစ်သွားကြပြီး
အဲဒါမှ ကျွန်လို့လဲနာမည်မခံ လွတ်လပ်ရေးလဲမရတဲ့ အသုံးချခံလူမျိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်တယ်။
ဒီနားက နိုင်ငံကြီးတွေကို ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်
လက်ရှိကျုပ်တို့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ သေးငယ် လွန်းပါတယ်။
လက်ရှိကျုပ်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ဟာ ချိနဲ့ လွန်းပါတယ်။
လက်ရှိကျုပ်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့လို လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ သေးငယ်လွန်းပါသေးတယ်။
ဒါ့ထက်ပိုပြီး အင်အားချိနဲ့သွားမယ့် နိုင်ငံမျိုး လူမျိုး မျိုး မဖြစ်စေလိုပါကြောင်းဗျာ…။
” အဲဒီတုန်းကဟာတွေကိုထားလို့ မနေ့တနေ့ကတောင်
သူနဲ့ မိုင်ရှစ်ထောင်ဝေးတဲ့ ဖေါက်ကလန်ကျွန်းကို မစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုပဲ ”
ပက်ပက်စက်စက် မှားနေတာလေးဆိုတော့ ထောက်ပြခွင့်ပြုပါ ။
ဖေါက်ကလန် ကျွန်းမှာနေတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်က ၊
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ရဲ့ လက်အောက်မှာပဲ နေချင်တာပါ ။
ဖေါက်ကလန် ကျွန်းမှာနေတဲ့သူတွေ က ၊
အာဂျင်တီးနား လက်အောက်မှာ လုံးဝ မနေချင်ပါဘူး ။
” intending to improve its relations with South America
by transferring the Falkland Islands
( with provisions to protect the islanders’ way of life ),
the United Kingdom secretly discussed the subject with Argentina.
However, when the news became public, the Falklanders protested the plans.
Asaresult, the UK increased its focus on the Islanders’ self-determination ”
အစပိုင်းမှာ အင်္ဂလန်ဟာ ဖေါက်ကလန်ကျွန်းကို အာဂျင်တီးနားကို ပေးဘို့ ၊
အာဂျင်တီးနား အစိုးရနှင့် လျို့ဝှက် ဆွေးနွေးပွဲတောင် လုပ်နေတာပါ ။
အဲဒီ သတင်း ပေါက်ကြားသွားတဲ့အခါ ဖေါက်ကလန်ကျွန်းသားတွေက ၊
အာဂျင်တီးနား လက်အောက်မှာ မနေချင်ဘူးဆိုပြီး ဆန္ဒပြကြပါတယ် ။
အဲဒီမှာ လူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးထားရတဲ့ အင်္ဂလန်လဲ ၊
ဖေါက်ကလန်ကျွန်းကို အာဂျင်တီးနားကို ပေးလို့မရတော့ပဲ ၊
ဖေါက်ကလန်ကျွန်းကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ ပြည်နယ် ပေးလိုက်ရတာပါ ။
အဲဒီမှာ အာဂျင်တီးနားက စစ်အင်အားသုံးပြီး အတင်း ဝင်သိမ်းတာမှာ ၊ စစ်ဖြစ်တာပါ ။
Modern Falkland Islanders continue to reject the Argentine sovereignty claim.
အခုနောက်ဆုံး အချိန်ထိလည်း ဖေါက်ကလန်ကျွန်းသားတွေက
အာဂျင်တီးနား နှင့် မပေါင်းလိုဘူးလို့ ပြောပါတယ် ။
သူတို့ဟာ ဗြိတိန် နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။
ကျနော့်အထင် ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ၊
ဖေါက်ကလန်ကျွန်းဟာ ဘယ်တော့မှ အာဂျင်တီးနား ပိုင် ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။
ဒီလိုပြောကြေးဆို ကိုကိုးကျွန်းကလူတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံသားပေးမယ်။ အမေရိကန်လက်အောက်မှာနေမလား ဗမာစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာနေမလားလို့ မေးကြည့်ရင်
ဆန္ဒခံယူရင် အမေရိကန်လက်အောက်မှာနေမယ်ဆို့ ဆန္ဒပြုကြမှာပဲဆိုပါစို့…
အဲဒါနဲ့ပဲ ဒေသခံတွေအလိုတူရင် နယ်မြေတခုကို ပိုင်ခွင့်ရသွားရောလား…
ပြီးတော့ အခြားလူတွေကို နိုင်ငံသားပေးဖို့ ပီအာပေးဖို့ အင်မတန်လက်တွန့်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ယူကေက ဖေါက်ကလန်ကျွန်းသားတွေကိုကျတော့ ပီအာလို အဆင့်အတန်းတွေ ဖေါချင်းသောချင်းပေးခဲ့တယ်လေ။ ပြောရရင် ကျွန်းပေါ်ကလူတွေအားလုံးနီးပါး ဗြိတိန်သြဇာခံတွေ ကျေးဇူးခံတွေ ချည်းပဲလို့ထင်တာပဲ…။
ဒီနေရာမှာ လူနဲ့ မြေ ကို ခွဲခြားစဉ်းစားဖို့လိုသဗျ..။
လူဟာသူများနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ရင် သူများနိုင်ငံသားအဖြစ် လွတ်လပ်စွာခြံခုန်ခွင့်ရှိသင့်ပေမယ့်
သူနေခဲ့တဲ့ နေဆဲဖြစ်တဲ့မြေကိုတော့ သူများနိုင်ငံကို ပေးခွင့် ယူသွားခွင့် မရှိထိုက်ဖူးလေ…။
တနေ့ ဘယ်သူတွေညီရင် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်လို့ လုပ်ခွင့်မျိုး
(လူချည်းသက်သက်တော့ တပြည်နယ်လုံးဖြစ်စေ ထွက်သွားခွင့်ရှိထိုက်ပါတယ်။)
” ကျနော်ဟာ အချိန်နှင့်အမျှ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့ ၊
နိုင်ငံ တွေရဲ့ နယ်နမိတ်တွေကို သိပ် ဖက်တွယ်သူ မဟုတ်ပါဘူး ။
အဓိက ဂရုစိုက်တာက ၊ လူ့ အခွင့်အရေး နှင့် တရားမျှတမှု ပါပဲ ”
အပေါ်က ကျနော်ပြောထားခဲ့သလိုပါပဲ ။
ဦးပါ က ” မြေ ” ကို အဓိက တန်ဖိုး ထားပြီး စဉ်းစားပြီး ၊
ကျနော် က ” လူ ” ကို အဓိက တန်ဖိုး ထားပြီး စဉ်းစား တာပါ ။
အဲဒါပဲ ကွာသွားတာပါ ။
ဆက်ပြီးတော့ ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ၊ ချဲ့ပြီး စဉ်းစားချင်စရာ တစ်ခုပါ ။
တိဗက် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက် ပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ ။
” ငါတို့ တိဗက်နိုင်ငံ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး တဲ့ ၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု တိဗက်ဒေသမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေက ပိုများသွားပြီတဲ့ ”
အခုလည်း ကချင်တွေက ပြောလာပါပြီ ။
Duwa Kachin ရဲ့ Face Book မှာတွေ့တာပါ ။
” ကချင်ပြည်နယ်က လူဦးရေ စာရင်းကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း
မရမက ဗမာ လူဦးရေများအောင် လုပ်ယူအပြီးမှာတော့…
အခုတလော ခဏဏ တွေ့လာရတာက
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တွေပဲ နေတာ မဟုတ်ဘူး… တဲ့။
သူတို့ အစိုးရ ရဲ့ စာရင်းလိမ် တွေကို ထုတ်ပြပါတော့တယ်။
(၁) ဟိုးကောင်း တောင်ကြားက ယုဇန စိုက်ခင်းအတွက်
အောက်ပိုင်းက ဗမာ မိသားစု သိန်းချီ များရဲ့ စာရင်းရယ်။
(၂) မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းအတွက် တက်လာတဲ့ အလုပ်သမား လူဦးရေ များကို
အချိန်မီ မဲထည့်လို့ ရအောင် အိမ်ထောင်စု ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာရင်း ရယ်။
(၃) တရုတ် နဲ့ ဂေါ်ရခါး၊ ပန်ဂျာပီကုလား နဲ့ ဘင်္ဂလီ မီးနွယ်ဝင်များ၊ မူဆလင် များကို
ဗမာ နာမည် နဲ့ မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်း လုပ်ပေးထားတာရယ်။
(၄) အောက်ပိုင်းက အလုပ်လက်မဲ့ လက်သမား၊ ပန်းရံ များ
အစုလိုက် အပြုံလိုက် တက်လာတဲ့ စာရင်းရယ်….
(၅) ရွှေမော်၊ ကျောက်စိမ်းမော်များသို့ တက်သွားသော
ဗမာ မှန်သမျှ ရဲ့ စာရင်း ရယ်…
(၆) နယ်ပေါင်းစုံက ရွှေ့ပြောင်း အစိုးရ ၀န်ထမ်းများကို
နေစရာ ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ လူဦးရေ
(ရ) အငြိမ်းစား စစ်သား မိသားစုများ အတွက်
အိုးအိမ် ၀န်ကြီးဌာန ရဲ့ ပလန အစီအစဉ် စာရင်းများ။
အားလုံးပေါင်း လိုက်တော့ နကိုယ် ရှိနေတဲ့
ကချင် နဲ့ ရှမ်း လူဦးရေ ကိုတောင် မှီလာပါတော့တယ် “
ကျနော်ဟာ အချိန်နှင့်အမျှ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့ ၊
အဓိက ဂရုစိုက်တာက ၊ လူ့ အခွင့်အရေး နှင့် တရားမျှတမှု ပါပဲ ။
မှန်တာပြောရရင် ဗမာ နှင့် တိုင်းရင်းသားတွေ အရေးကိစ္စမှာ ၊
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ( အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ) ၊
တိုင်းရင်းသား အနည်းစု ကို သနားသူ ( Ethnic Minority Sympathizer ) ပါ ။
သို့ပေမယ့်ပေါ့လေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဗမာ အများစုဖြစ်သွားရင်တော့ ၊
ကျနော်တို့ ဒီမိုသမားတွေလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး ။
ကြုံတုန်းပြောရရင် ရခိုင်တွေလည်း ဒီ ကိစ္စ ကို ၊
သေသေချာချာ စဉ်းစား ဆင်ချင်ကြပါ ။
ရခိုင်တွေရဲ့ တစ်ချို့ အတွေးအခေါ်တွေဟာ နဲနဲ အစွန်းရောက်သော်ငြားလည်း ၊
မှန်တာပြောရရင် ၊ ကိုယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်တွေကို မ ရှုံးစေချင်ရိုး အမှန်ပါ ။
အင်း ၊ ဘင်္ဂါလီ က လူများစု ဖြစ်သွားရင်တော့ ၊ ရှုံး ပါပြီ ။
ဒါကြောင့် ရခိုင်တွေ နိုင်ငံခြားထွက်တာတွေ လျော့ရမှဖြစ်မယ် ။
ချစ်လို့ ပြောတယ် မှတ်ပါကွယ် ။
Yes ဒီတချက်တော့ သိပ်ဟုတ်တယ် ဦးဦးပါလေရာရေ
ကျနော်လဲ နိုင်ငံတခု အတွင်းက နယ်မြေတစိတ်တပိုင်း ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးလို့ တခါမှ မစဉ်းစားဖူးပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂမှာ စစ်နိုင်တဲ့ ငါးနိုင်ငံကရော ဟိုတုန်းက ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲ။ တရုတ်ရော တိဘက်ကို ဝင်သိမ်းပြီး မျိုခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ အင်္ဂလန်ရော ဖောက်ကလန်ကျွန်းကို မစွန့်လွှတ်ပါဘူး။
အဲဒီခွဲထွက်တာဟာ လူအခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပြောတာဟာ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ပြောတာ လုံးဝဦးတည်ချက် မကောင်းဘူးလို့ ယုံလို့ လက်မခံနိုင်ပါ။ အမှန်အတိုင်း ဆိုရသော် မန်းဂေဇက် အယ်ဒီတာဟာ ရိုဟင်ဂျာ ခွဲထွက်ရေးသမားလို့ နာမည်ကြီးသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ အခြားဆိုက်ဒ်တွေဆို ဒီလို စကားမျိုးကို အယ်ဒီတာက ဒီလိုအချိန်မှာ လုံးဝမပြောပါဘူး။
ခွဲပြီလို့ပဲ စဉ်းစားကြပါစို့။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ခွဲပြီပဲ ဆိုပါစို့။ ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲမှာလဲ တခြား မြိုတို့ သက်တို့ စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရှိသေးတယ်လေ။ အဲဒီလူတွေကပါ သူတို့လည်း သီးသန့်မြို့နိုင်ငံလေးနဲ့ နေချင်တယ်ဆိုရင် ရခိုင်တွေက ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ ခွဲမထွက်ပါနဲ့ တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက်တွေပါလို့ ပြောရမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဥပမာနော်။ မရရင် အကြမ်းကိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ ခွဲလိုက်တာနဲ့ အင်အားနည်းသွားပြီ မဟုတ်လား။ အဲဒီလို ဆိုလိုတာပါနော်။
ကျနော့် အကြိုက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ တနေ့မှာ အထူးအခွင့်အရေးတွေ ပေးပြီးနေစေမယ်။ သို့သော် ခွဲထွက်ဖို့ လုပ်ရင်တော့ အခြေခံဥပဒေမှာကို ခွင့်မပြုဖို့ ထည့်သွင်းရေးဆွဲ သင့်သလို ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်နဲ့ ထိန်းထားသင့်တယ်။ နောက်တော့ ယူအက်စ်ကလူတွေလောက် ပညာတွေ တတ်လာရင်လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။ အမေရိကန်တွေကို ယူအက်စ် ယူအက်စ်လို့ အော်တတ်အောင် ပညာရေးစနစ်နဲ့ သေသေချာချာ ပုံသွင်းပြီးသား ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေကို တန်းတူညီမျှ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် မပေးနိုင်သေးသရွေ့ သူတို့ရဲ့ခွဲထွက်ခွင့်ကို (ပြည်နယ်သယံဇာတတွေကို မျက်စောင်းထိုးနေတဲ့ အာဏာရှင်တွေ မပြောနဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုသူကတောင်) တားမြစ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး..။
ပြည်ထောင်စုကြီး ဆက်လက်တည်မြဲစေချင်ရင် တန်းတူညီမျှ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို မဖြစ်မနေကျင့်သုံးရမှာပါ..။
ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လို့ဆိုရင်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး အခွင့်အရေးတူညီစွာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်ရမယ်..။ လူတစ်စုရဲ့လက်အောက်မှာမရှိဘဲ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တဲ့ သမ္မတ၊ လွှတ်တော်ရဲ့ အောက်မှာဘဲ ရှိရပါမယ်..။
အမေရိကပြည်ထောင်စုထဲ.. ၅၁ခုမြောက်ပြည်နယ်အဖြစ်.. ဖြစ်နေချင်တဲ့.. ပေါ်တူရိကို ကျွန်းနိုင်ငံအကြောင်းပါ…
အမေရိကန်တယောက်အနေနဲ့.. ကျုပ်ဗုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့.. အဲဒီလိုဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ကို.. ယူအက်စ်ပြည်နယ်တခုအဖြစ်အလိုမရှိဘူး..
မဂျရတီရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ဖြစ်နေတဲ့.. ကွန်ဂရက်(လွှတ်တော်)ကလည်း.. မလိုချင်ပါဘူး..
ပြောရရင်.. ဒီခေတ်မှာ.. တိုင်းပြည်တခု..ကိုယ့်လက်အောက်ဝင်..ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်ဆိုလည်း.. ငြင်းပယ်မယ့်.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်ကြီးတွေအများကြီးပါ…။
နေရင်းထိုင်ရင်း. ကိုယ့်တိုင်းပြည်ငွေတွေပေး..အင်ဖရာတွေဆောက်ပေး.. သူ့ပြည်နယ်သားတွေ..ပြည်မထဲဝင်လာတာတွေဖြစ်မှာလေ…
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်(၂၀၁၂)ထဲ.. တက်ခ်ဆပ်ပြည်နယ်အပါအ၀င်..ပြည်နယ်တချို့.. ယူနိုက်တက်စတိတ်(အမေရိကား)က.. ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြတယ်..
မှတ်မိသလောက်.. အစိုးရ(အိမ်ဖြူတော်)ရဲ့.. မက်ဆေ့ခ်ျက.. Go Ahead ဆက်လုပ်နိုင်ပါသည်ပဲ..
တက်ခ်ဆပ်ဂါဗနာ(တပ်ခ်ဆပ်အစိုးရ)ဆို..မခွဲထွက်ပါဘူးဆိုပြီး.. သူ့ပြည်နယ်ထဲကခွဲထွက်ချင်သူတွေကို.. ပြတ်ပြတ်သားသား.. ကန့်ကွက်လိုက်တယ်..။
ဖယ်ဒရယ်အကြောင်း.. ခွဲထွက်ခွင့်အကြောင်း.. တွဲဖက်ခွင့်အကြောင်း.. ဆွဲတက်ခွင့်အကြောင်း.. စာဖတ်ကြပါ.. ဆက်ဆွေးနွေးကြပါ.. လို့ပဲ..
မြန်မာပြည်အစိုးရလည်း.. သေသေချာချာလေ့လာနေတယ်ထင်မိကြောင်း.. :harr:
22 States Want To Secede From The Union!? – YouTube
Nov 16, 2012 – Uploaded by Jon
In his 500th public Jon’s World video, Jon shares his feelings regarding 22 separate states in America ..
ကိုရင်ကတော့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဖယ်ဒရယ်မူဟာ တော်တော်အလှမ်းဝေးဦးမယ်
မြင်မိတယ်။ (အာဏာကို ဗဟိုအစိုးရလက်ထဲ ဆုပ်ကိုင်ချင်သူတွေ များနေလို့နေမယ်)
ခေတ်အဆက်ဆက် ဗိုလ်အစိုးရများရဲ့ စနက်တွေကြောင့်
တိုင်းရင်းသားတွေဟာလည်း ဗမာဆို တသီးသန့်အနေဖြင့် ယုံကြည်ချက်
ပျောက်ကုန်ကြတယ်။ ဘယ်စနစ်တည်ဆောက်ဆောက် ယုံကြည်မှု အရင်းခံမှ
ရေရှည်ဆက်သွားလို့ရပါမယ်။ ပြည်သူ အများစုသေချာမသိတဲ့ ဖယ်ဒရယ်ကို
ဘယ်လိုမျိုးကျင့်သုံးမှာလဲ။ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်… စကားမစပ်..
ကိုရင်တို့ သင်္ဘောလိုင်းတွေမှာ ကရင်ပိုင်သင်္ဘောလိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။
ဗမာသင်္ဘောသားသိပ်မတင်ဘူး.. ကရင်သင်္ဘောသားဆို အင်္ဂလိပ်စာ
မပြောတတ်၊ သံချေးမခေါက်တတ်လည်း အလကားတင်ပေးတယ်။ ကရင်သင်္ဘောသားတွေက
သဘောကောင်းတယ် လက်သီးပြင်းတယ်ဆိုသလိုမျိုး သင်္ဘောပေါ်မှာ
တခြားလူမျိုးနဲ့ မူးလာရင်ပြသနာတက် ထိုးကြိတ်ကြ.. နောက်ဆုံးအရေးယူ
အိမ်ပြန်ပို့နဲ့…။ နိုင်ငံခြား ကမ်ပဏီမှာ နာမည်ပျက်ဝင်သွားတော့ ဗမာတဲ့…။
ဒါကြောင့် တိုင်းရင်သား ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏
တရားမျှ တမှု ရှိရှိနဲ့ စည်းကမ်းတကျ အုပ်ချုပ်မယ် ဆိုရင်
ဘယ်လူမျိုး ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆိုသဘောကျပါတယ်။
ဖေ့ာကလန်ကျွန်း၊ ပြီးတော့ ဟောင်ကောင်၊ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ရှေးတုန်းက အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်တာကို မီခဲ့ တဲ့ လူကြီးတွေကိုမေးကြည့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ကို တန်းတ တုန်းပဲ။
ယိုးဒယားတွေ ဗမာကို မုန်းပေမယ့် ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးကိုဗမာတွေ ထက်ပိုပြီးလေးစားတယ်။
အဲဒါ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တွေပါ။ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေလည်း အဲလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ ဘယ်လူမျိုး။ ဘယ်ဘာသာ မဆို လက်ခံပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘယ်လူမျိုးကဘယ်လူမျိုးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တို့ ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်နေရာကိုစိုးပိုင်အုပ်ချုပ်ဖို့တို့ဆိုတာတွေက
တကယ်အရေးကြီးတာက စံနစ် ပါ….။
မျှတ ၊ မှန်ကန်ပြီး တတ်နိုင်သမျှပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးထားတဲ့
အမြဲမပြတ်လဲ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စွက်ထားတဲ့
အဲသလို လူလူချင်း တကျပ်မပို တကျပ်မလျှော့ပဲ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့
လူလူချင်း တစ်ဦးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို တစ်ဦးက မဖြစ်မနေလေးစားရတဲ့
ဒီမိုကရေစီစံနစ်မျိုးသာ ပြည့်ပြည့်၀၀ ရမယ်ဆိုရင်
ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်နေရာမှာ အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ အရေးမပါပါဘူး..။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံး ဗမာ တစ်ယောက်မှမပါရင်ဖြစ်ဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံး တိုင်းရင်းသား ကမန်၊ နိုင်ငံသား ဘင်္ဂါလီတွေချည်း ပါနေရင်ဖြစ်ဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံး နိုင်ငံသားရှမ်းတရုတ်၊ တိုင်းရင်းသား ၀ ၊ တိုင်းရင်းသားကချင်လူမျိုးတွေချည်းပါနေရင်ဖြစ်ဖြစ်
ကျုပ်က ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို အဲသလို ယုံကြည် တယ်….။
” အဲသလို လူလူချင်း တကျပ်မပို တကျပ်မလျှော့ပဲ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့
ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်နေရာမှာ အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ အရေးမပါပါဘူး ”
ဟုတ်ပါတယ် ဒီမိုကရေစီ စံနစ် အမှန်သာရနေရင် ၊
ဘယ် လူမျိုး အုပ်ချုပ်နေနေ ပြဿနာ မရှိပါဘူး ။
ဦးပါလေရာပြောတာ ထောက်ခံတယ်။ တဦးခြင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံသားကူးပြောင်းခွင့် လွတ်လပ်စွာ ပြုနိုင်ပေမဲ့ နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ကြတော့ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်းဖြစ်သွားလို့ ဒေသခံတွေ ဆန္ဒရှိတိုင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နို့မို့ရင် ကမ္ဘာနေရာအသီးသီးမှာ လူမျိုးရေး နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ ပထမ ကမ္ဘာစစ် အဲသလိုနဲ့ ဖြစ်ခဲ့လို့ စစ်အပြီးမှာ ကုလသမဂ္ဂဘိုးအေ နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းဖွဲ့စည်း ထူထောင်ပေးခဲ့ရတာပါ။
ဖက်ဒရယ်မူကို အပြစ်မပြောဘူးနော်၊ ဖောက်ကလန်ကျွန်းကိစ္စကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ လွတ်လပ်မှု၊ ပွင့်လင်းမှုတွေမှာ ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေး အခရာကြပေမဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်းကြတော့ အစုအဖွဲ့နဲ့ သွားရတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲ မကြည့်ရဘူး။ အတိတ် ပစ္စုပ္ပန် အနာဂတ် သုံးပါးစလုံး ဆက်စပ်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဥရောပနိုင်ငံတွေ ဘယ်လောက်ပဲ နီးစပ်နီးစပ် ဥရောပဘုံဈေးဖွဲ့ပြီး ဈေးကွက်တည်ဆောက်၊ ဥရောပ ပါလီမန်ထောင်ပြီး နိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်တွေလုပ်၊ ယူရိုငွေကြေးဘုံစနစ် ထားရှိလည်း ဘယ်တိုင်းပြည်ကမှ ကိုယ့်အချုပ်အခြာအာဏာ မစွန့်လွှတ်ဘူး။ ကိုယ့်မြေကို တလက်မမှ အထိပါး မခံဘူး။ တဖက်ကလည်း အဲဒီအိုင်ဒီယာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဗဟိုဦးစီးစနစ် အာဏာရှင် ထူထောင်တယ်။ လူနည်းစုကို နှိပ်ကွပ်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရော။ မြန်မာပြည်ရဲ့ နှစ်ခြောက်ဆယ့်ငါးနှစ်ကြာ သမိုင်းကြောင်းအရ လူများစုရော လူနည်းစုပါ ဘယ်လို ခရီးသွားရမယ်ဆိုတာ သိကောင်းလောက်ပါပြီ။ ဗမာတွေဖက်က သဘောထားကြီး ပြဖို့လိုသလို လူနည်းစုဖက်ကလည်း နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ နို့မို့ရင် ပါလက်စတိုင်းတွေလို ကိုယ့်အခြင်းခြင်း မညီညွတ်တိုင်း အားနည်းချက်ကို ဖုံးကွယ်ခြင်တိုင်း အစ္စရေးကို အပြစ်တင်နေရင်း ဘေးက ကိုယ်နဲ့အမျိုးတူ နိုင်ငံတွေရဲ့ ကြိုးဆွဲရုပ်၊ ကြားခံစစ်မြေပြင် စတဲ့ဘဝကနေ လွတ်တော့မည် မဟုတ်ပါ။